San Htun's Diary: March 2014
နယ်အိမ်တွေမှာ အိမ်သာတွေက အိမ်ရဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိတော့ ညဖက်ဆို မကြီးက အိမ်သာ တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ကြောက်လန့် စရာအခန်းတွေဆို မောင်မောင်က မျက်နှာကို အုပ်ထားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေကြားထဲမှာ ကျွန်မက သတ္တိကောင်းသူလို့ဆိုရမလား။ အိမ်သာ တစ်ယောက်တည်း သွားရဲ၊ မျက်နှာမအုပ်ဘဲ သရဲရုပ်ရှင် ကြည့်ရဲလို့ လေ။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ခုလို တီဗွီ အိမ်တိုင်းမရှိ။ တရွာလုံးမှာမှ ၁ လုံး၊ ၂ လုံး လောက်ပဲ ရှိတာ။ တယောက်တလှည့် ပုံပြောတမ်း ဆော့ကြရင် ဘုရားတောင်၊ အပျိုကြီး ဘုရားနားက ဥစ္စာစောင့်ပုံပြင်တွေ၊ ညဖက်ဆို ထွက်တတ်တဲ့ ချီးစားစုန်းတွေအကြောင်း ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးတာလဲမဟုတ် ကြားဖူးနားဝတွေနဲ့ချဲ့ ထွင်ပြောကြပေမဲ့ ကြောက်သားလား။ သရဲပုံပြင် နားထောင်တဲ့နေ့ တွေဆို အိမ်သာ တစ်ယောက်တည်း မသွားရဲတော့ဘူး။ နည်းနည်းကြီးလာတော့ သံဗုဒ္ဓေဂါထာ၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ရွတ်ရင် သရဲတွေ အနားမကပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်လာတော့မှ မကြောက်တော့တာ။
အဖေ၊ အမေ ရန်ကုန်မှာ မရှိရင် မကြီးက အိပ်ယာဝင်ခါးနီးတိုင်း တံခါး၊ ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်မပိတ် သေချာစစ်၊ အနားမှာလည်း ဓာတ်မီး၊ သော့၊ ဖယောင်းတိုင်၊ မီးခြစ်ဆောင်ပြီး အိပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက မကြီးကို ပူတတ်ရန်ကောလို့ ။ မကြီးလည်း နိုင်ငံခြားသွားရော ကျွန်မလည်း မကြီးလို ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်နောက်ဖက် စက်ရုံနားမှာ အိမ်လေးတလုံး ရှိတယ်။ တနေ့ တော့ တိုက်ပတ်ပတ်လည်မှာ လူတွေအုံနေလို့စပ်စုကြည့်တော့မှ အိမ်ပိုင်ရှင်အရှုးက အိမ်ငှားယောက်ျားကို ဓားနဲ့ ခုတ်ပြီး သတ်လိုက်လို့ တဲ့။ အရှုးက ဓားကိုင်ပြီး အိမ်ထက်ကနေ မဆင်းလို့ရဲမှုးကိုယ်တိုင် လာဖမ်းရတယ်။ အိမ်ငှားလင်မယား နောက်နေ့ ဆို မောင်လမြိုင်ကို ပြောင်းတော့မှာတဲ့။
အစိမ်းသေပဲ သေလို့ လား ညနေ နေဝင်ချိန်ဆို သွေးညှီနံ့ ရသလို ခံစားရ၊ တစ္ဆေခြောက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်လို့အဲဒီအချိန်တုန်းက ညဖက်ဆို အပြင်ထွက်ဖို့တွန့် တယ်။ မကြီးကတော့ ရဲတင်းတွေ၊ ဓားတွေ ကိုင်ထားတဲ့သူတွေက ကြောက်တတ်တဲ့။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာတုန်းက အမ်အာတီပေါ်မှာ နံဘေးက ထုိုင်ခုံလွတ်သွားတော့ လူတယောက် အသည်းအသန် ပြေးလာပြီး လာထိုင်တယ်။ ပြီးတော့ လူတွေကို စကားတွေ အော်ပြောနေတာ ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မက ထသွားရမှာအခက် ထိုင်နေတာလည်း အရှုးက ဘေးနားမှာ။ ကြောက်လိုက်တာများဆို အသက်တောင် ရှုရဲ့ လား၊ လှုပ်တောင် လှုပ်ရဲ့ လား မသိ။ အင်တန်းအတူဆင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ ဘာဆိုဘာမှ မကြောက်တတ်သူလို့ထင်ထားတာ ခုတော့ ကျွန်မ ကြောက်တာလည်း ရှိပါသေးလားတဲ့။
တစ္ဆေပွဲတော်လဆို တစ္ဆေတွေ ထွက်တယ်ဆိုလို့အဲဒီလဆို ညဖက်သိပ်မထွက်၊ မှောင်တဲ့နေရာတွေဆို ရှောင်တယ်။ တစ္ဆေတွေက အလင်းကြောက်တယ်ဆိုလို့ ။ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေက ည ၁၁ နာရီခွဲ နောက်ဆုံးကားစီးပြီး ကျောင်းကနေ ပြန်ပေမဲ့ စာအရမ်းကြိုးစားတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်က ည ၁၂ နာရီကျော် စာကြည့်ပြီးတော့မှ အိမ်ပြန်တယ်။ သူ့ အိမ်က ကျောင်းနဲ့ နီးလို့လမ်းလျှောက်ပြန်တယ်။ အင်္ကျီဖြူဝတ်ထားတဲ့ လူတယောက် သူ့ နောက်က လိုက်တယ်ထင်လို့နောက်ဆို စောစောပြန်တော့တယ်။
စာသင်ချိန်ပြီးရင် အုပ်စုလိုက်ပေးထားတဲ့ အခန်းတွေမှာ စာစုလုပ်၊ ပရောဂျက်တွေ လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီနေ့ က ကျွန်မတို့ အုပ်စုအခန်း မအားလို့ဘေးခန်းမှာ ပရောဂျက် လုပ်ကြတယ်။ ညနေ ထမင်းသွားစားကြတော့ အခန်းထဲမှာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း။ ပရောဂျက်မပြီးသေးလို့ကွန်ပျူတာထဲ ခေါင်းစိုက်နေတာ ကွန်ပျူတာ နှိပ်သံလိုလို ကြားမိတော့ လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျောင်းက အခန်းတွေက နီးတော့ တခြားအခန်းက ဖြစ်မှာပါလေ။ နောက်တော့မှ အုပ်စုထဲက ညီမငယ်လေးက ဟင်...အစ်မ တစ်ယောက်တည်းလား ဒီအခန်းက မိုက်ကယ်နေသွားတဲ့အခန်း နာမည်ကြီးဆိုတော့မှ ကြောက်သွားတာ နောက်ဆို အဲဒီအခန်းကို တစ်ယောက်တည်း မသွားတော့ဘူး။
မာလာမုန်တိုင်း တိုက်တုန်းက ကျွန်မက နယ်မှာ။ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးတွေ ရိုက်ခတ်သံ၊ လေတွေ တရွှီးရွှီးတိုက်၊ ဒီရေ အိမ်ပေါ်ကို ၁ ပေလောက် တက်တယ်။ အိမ်ပေါ်ကို ဒီရေတက်တာ တခါမှ မမြင်ဘူးတော့ ကြောက်သွားမိတယ်။ ကိုကြီးရွှေဘက ည ၁၁ ဒီရေကျမယ်လို့ပြောလို့ခုံပေါ်ကနေ ဒီရေကျတာ ထိုင်စောင့်နေတာ ဒီရေ ခြေကျင်းဝတ်လောက်ရှိရော အမေက သမီးရေ နုန်းတွေကို ဒီရေနဲ့ဆေးချရမယ်။ ဒီအချိန်က ဆေးချဖို့အချိန်ကောင်းဆိုလို့အုန်းတံမြက်စည်းနဲ့ဒီရေရေ နင် သယ်လာတဲ့နှုန်းတွေကို နင့်ဘာသာသယ်သွား အင်းဟယ်..အင်းဟယ်ဆိုပြီး ဆေးချရတယ်။ မာလာမုန်တိုင်းက ကျွန်မတို့ ဖက်ကို အဖျားပဲခတ်တယ်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလတုန်းက နို်င်ငံခြားတက္ကသိုလ်လျှောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့ဘီးစီးနေချိန်ပေါ့။ ညမထွက်ရအမိန့် အောက်မှာ ကင်းလှည့်နေတဲ့ စစ်ကားသံတွေ၊ အပြစ်မဲ့စွာ သွေးမြေကျသူတွေရဲ့ အရိုးတွန်သံတွေ၊ သန်းခေါင်ယံချိန်မှာ ရှည်ရှည်ဆွဲဆွဲ အူလိုက်တဲ့ ခွေးအူသံတွေ။ ညည့်နက်ရင်ဖြင့် ဘယ်ကျောင်းကို ဝင်စီးပြန်ပြီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကင်းစောင့်ကြတဲ့ ရက်ကွက်သားတွေရဲ့အချက်ပေးသံတွေ။ ဆန္ဒပြသူ၊ ရပ်ကြည့်သူ ဘာသောငြားသော မခွဲခြားဘဲ ကားပေါ် ဆွဲတင်တဲ့သတင်း၊ စစ်ကြောရေးရုံးမှာ စစ်မေးနှိပ်စက်တဲ့ သတင်းတွေ ကြားရတော့ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်အခါ ကိုယ့်ကိုများ လာဆွဲမလား စိတ်တထင့်ထင့် စိုးရိမ်စိတ်၊ ကြောက်လန့် စိတ်၊ မုန်းတီးရွံရှာစိတ်၊ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ခေတ်ဆိုးခေတ်ပျက်ကြီးရဲ့အနိဋ္ဌာရုံတွေကို ကြောက်လန့် နေခဲ့ဖူးတယ်။
နာဂစ်တိုက်မဲ့နေ့ တုန်းက နာဂစ်တိုက်မယ်မှန်းတောင် မသိဘူး။ အဲဒီတုန်းက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံဖို့တီဗွီမှာ တချိန်လုံး လွင့်နေတာကိုး။ မုန်တိုင်းဝင်မဲ့နေ့ က ရုံးတွေ၊ ကျောင်းတွေ စောစောပိတ်လို့တီဗွီဖန်သားပြင်အောက်ကနေ မုန်တိုင်းဝင်မဲ့ သတင်းပေးစာတမ်းတွေ့ လို့အဖေ့ဆီ လှမ်းဖုန်းဆက်တော့ မုန်တိုင်းက တိုက်နှင့်နေပြီ။ ရန်ကုန်ကို မုန်တိုင်းဝင်တဲ့အချိန်က ညဖက်။ တိုက်ပြိုသွားမလားလို့ တောင် ထင်မိတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်တွေ ၊ သစ်ပင်တွေ ပြိုလဲလို့ရန်ကုန်တမြို့ လုံး အမှိုက်ပုံဖြစ်နေပြီ။ လှိုင်မြစ်ရေတိုးလို့မြေညီထပ်က ပစ္စည်းတွေကို အပေါ်တင်၊ ရေကျချိန်မှာ နှုန်းတွေရှင်း။
နိုင်ငံခြားရေဒီယို အသံလွှင့်ကနေ ဟိုင်းကြီးကျွှန်းမှာ လူ ၁၅၀ ယောက်လောက် သေတယ်လို့သတင်းကြားတော့ ငေါက်ကနဲ ကောက်ထိုင်တော့ပဲ။ ဘုရား..ဘုရား အဖေ၊ အမေ မတော်တဆ တိမ်းပါးသွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက တစက်မှ စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိ။ ပုသိမ်ကတော့ နာဂစ်ဒဏ်က လွတ်တယ်။ ရန်ကုန်က ဟိုင်းကြီးအဆက်အနွှယ်တွေ ရောက်လာကြပြီ။ ရှပ်ပြေး(အမြန်ရေယာဉ်)တစ်စီး တက်လာတော့ ပင်လယ်ဖက်က သတင်းတွေမေးဖို့ပုသိမ်ကမ်းနားမှာ လူတွေမှ ကမ်းလုံးညွှတ်နေတာပဲ။ ရန်ကုန်မှာ နေတာကြတော့ နယ်ကသူတွေကို သိပ်မသိ။ ဟဲ့ ကောင်မလေး နင့်အမေ သင်္ဘောနဲ့ပါလာတယ် ဦးတဆုတ်အိမ်ကို သွားတယ် အဲဒီကနေ သွားစောင့်ဆိုတဲ့ အသံကြားလို့သွားစောင့်နေတော့ ဆိုက်ကားနဲ့အမေ ရောက်လာတယ်။ အမေက ကျွန်မကိုမြင်တော့ ငိုတယ် ကျွန်မတို့ ကို သေပြီထင်နေတာတဲ့။ ကျွန်မတို့ ကလည်း အမေတို့အသက်မှ ရှင်သေးရဲ့ လားလို့ ။
သင်္ဘောဆိပ်မှာ လာစောင့်နေတဲ့ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဆယ်နှစ်စာလောက် အိုစာသွားတဲ့ အဖေ့ကိုမြင်တော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ရသာကိတ်မုန့် ကျွှေးတော့ ဒီလိုမုန့် လေး မစားရတာ ၃၊ ၄ ရက် ရှိပြီ။ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ ဆန်အိတ်တွေရှိပေမဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်က အချပ်လိုက်တင်မက ခေါင်မိုးက ထုတ်တန်းကျားတန်းတွေပါ ကျွှတ်ထွက်သွားတာ။ လေဘယ်လောက်ပြင်းလဲလို့ ။ လေတိုက်တဲ့ဖက်ကို မျက်နှာမူလို့မရဘူးတဲ့။ အိမ်တော်တော်များများ ပြိုတယ်။ တော်တော်တောင့်တဲ့ အိမ်ကသာ ယိုင်ရုံလေးယိုင်တာ။ အိမ်ရှေ့ ကနေ မြစ်ထဲထိ ထိုးထားတဲ့ တံတား၊ ဆောင်ပုံလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ပစ္စည်းအတိုအထွာထားတဲ့ အိမ်ကလေးဆို ငုတ်တိုင်တောင် မတွေ့ တော့ဘူး အစပျောက်သွားတာ။ မုန်တိုင်းက ကျွန်မတို့ နယ်ဖက်မှာ နေ့ လည်းပိုင်းတိုက်လို့လူအသေအပျောက် နည်းတာ။
လပွတ္တာ၊ ဘိုကလေး၊ ပြင်စလူဖက်မှာက ညဖက်တိုက်တာ။ အိမ်တွေက ဓနိမိုး၊တိုင်ကနော်ကနဲ့ တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုတော့ လေတချက်လောက် ဝှေ့ တာနဲ့အကုန်ပြားပြီ။ မုန်တိုင်းဒီလောက် ပြင်းမယ်လို့ဘယ်သူမှ မထင်ထားခဲ့တာပါ။ သတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေ၊ မုန်တိုင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဖို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပျက်ကွက်ခဲ့လို့ဒီလောက်လူအသေအပျောက်များတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ပုသိမ်ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် မျက်လုံးတွေ မို့ အစ် နီရဲနေတော့ ကြင်နာတတ်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က မေးတော့ သူ့ မိဘ၊ မောင်ဘွား၊ အမျိုးတွေ အကုန်သေသွားတယ်။ သူတောင် ရန်ကုန်မှာနေလို့အသက်ရှင်တာလို့ပြန်ဖြေသံကြားရတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
Telsa's interior. credit to Google
အဲဒီကတည်းကစလို့မုန်တိုင်းဆို သေးသေး၊ ကြီးကြီး အကုန်ကြောက်တယ်။ ယူအက်စ်ရောက်တော့ ကျွန်မနေတဲ့ အိုင်အိုဝါ၊ အင်ဒီယားနား၊ အိုဟိုင်းရိုး၊ ကန်တက်ကီ အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသ ပြည်နယ်တွေက လေဆင်နှာမောင်း ပေါတယ်။ တိုင်ဖွန်း၊ ဆိုင်ကလုန်းတွေက မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကို သိနိုင်ပေမဲ့ ဘယ်အချိန်တိုက်ခတ်မလဲလည်း မသိ၊ တိုက်ခတ်မဲ့လမ်းကြောင်းလည်း မသိ၊ တိုက်ခတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက် အကုန်ခြေဖျက်သွားတဲ့ လေဆင်နှာမောင်း ဆိုတာကြီးကိုလည်း ကြောက်တယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက သူငယ်ချင်းများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဝိုင်သောက်ပြီး အိပ်ပျော်နေတာ ဆူနမ် လာနှိုးတော့မှ တော်နေဒိုးဖြတ်နေမှန်း သိတော့တယ်။ အဆောင်မှာ လျှပ်စီး မီးတွေဖြတ်၊ အင်တာနက်တွေ ဒေါင်းလို့အင်မာဂျန်ဆီမီး ထွန်းထားတယ်။
အာအေ အဆောင်မှုးတွေက အဆောင်သူတွေကို အချိန်မှီ နှိုးဆော်ဖို့နှိုးကြားတက်ကြွနေတယ်။ မိုးခြိမ်းသံတွေ တဂျိမ်းဂျိမ်း၊ လျှပ်စီးတွေ တလက်လက်။ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်၊ နွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်၊ မုန့် ၊ ရေဗူး၊ စောင်ထည့်၊ ဂျာကင်ဝတ်။ တယောက်တည်းထက်စာရင် စုနေတယက အကြောက်နည်းနည်း ပြေတာမို့ဆူနမ် ငါကြောက်လို့နင့်အခန်းမှာ လာအိပ်လို့ရမလားဟင်မေးတော့ ဆူနမ်က သူ့ ကုတင်ကို မေးငေါ့ပြတယ်။ လား..လား မိုင်းနဲ့ရာမား ငသွက်နှစ်ကောင် ဆူနမ့်ခုတင်ပေါ် ဦးနှင့်နေပြီ။ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ရင် မြေအောက်ထပ်က လုံခြုံစိတ်ချရပေမဲ့ မြေအောက်ထပ် မရှိရင် ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတို့ လို ပြတင်းပေါက်တွေ မရှိတဲ့ အခန်းမှာ နေရတယ်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက လေဆင်နှာမောင်း သတိပေးချက် ဆိုင်ရင်းသံကြားရင် အသင့်ပြင်ပေတော့ပဲ။
၂၀၀၅ ခရစ်စမတ်နောက်နေ့မနက်ဖက်စောစော ငလျင်လှုပ်ချိန်မှာ ကျွှန်မက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတုန်း။ ရေတိုင်ကီကနေ ရေတွေ ဗောင်ဗင်ခတ်တော့ အအိပ်ဆတ်တဲ့ မကြီးက ငလျင်လှုပ်တာ အိပ်ပြင်ထွက်ရမယ်တဲ့။ အိပ်ချင်မူးတူး မထချင်ထချင် မျက်လုံးပွတ်လို့ အိမ်ပြင်ရောက်ရော တတိုက်လုံးက လူတွေက လမ်းပေါ်မှာ ရောက်နှင့်နေပြီ။ အဲဒီတုန်းက တိုက်ပြိုလို့သေသွားရင်တောင် ငလျင်လှုပ်လို့သေသွားမှန်း သိမယ် မထင်ဘူး။ ဂျပန် ဆူနာမီ သတင်းတွေ မြင်ရတော့ ဆူနာမီကိုလည်း ကြောက်တာပဲ။ ဟောင်ကောင် - ချီကာဂို ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်ကျော်နေပြီဆိုတာ ဘုတ်မှာတွေ့ တော့ အင်း စက်တခုခုချို့ ယွင်းလို့လေယာဉ်ပျက်ကျရင်တော့ အသက်ရှင်ကိန်း မြင်မယ်မထင်။ ငါတော့ ဂန့် မှာ အသေအချာပဲလို့တွေးကြောက်တဲ့အခါ သံဗုဒ္ဓေ ရွတ်တယ်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကျတုန်းက ငါတော့ ပြည်တော်ပြန်ရပြီ အဖေ့ပိုက်ဆံတွေ ဆုံးရချည်ရဲ့တွေးကြောက်တယ်။ ပန်းဝတ်မှုန် အလာဂျီဖြစ်လို့တကုိုယ်လုံး ကုတ်ဖဲ့နေတုန်းက ငါတော့ သေတော့မှာပဲလို့တွေးကြောက်တယ်။ စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်ရင် မဖြေနိုင်မှာ၊ ကျမှာ တွေးကြောက်တယ်။ အမှတ်စာရင်း ထွက်ပြီဆိုရင် ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်တယ်။ မီးပွိုင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဂျီပီအက်စ်၊ ဘေးဘီဝဲယာ သေချာကြည့်။ အချက်မပြမဘဲ ဖတ်ခနဲ ရှေ့ ကို ဝင်လာတဲ့ကားတွေကြောင့် သူ့ အမှားက ကုိုယ့်အမှား ဖြစ်မှာစိုးလို့ကားမောင်းရတာ အာရုံစိုက်ရတယ်။ ဝုန်းကနဲ မြောက်တက်သွားတော့ ဘာဖြစ်မှန်း မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ကနေ ဝင်ကျုံးခံရတာ။
Telsa. credit to Google
ကန်တက်ကီကနေ မေရီလန်းအထိ မိုင် ၆၀၀ ခရီးကို ကားဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်လေးမောင်းပြီး တစ်ယောက်တည်း ခရီးနှင်လာတုန်းက အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က တောင်တွေဆီမှာ မြူတွေဆိုင်း၊ နှင်းတွေကျ၊ ကားကြောပြတ်တဲ့နေရာမှာ လီဗာဖိနင်းပေမဲ့ မိုင် ၄၀ ကနေ မတက်တဲ့အခါ ကြောက်သွားဖူးတယ်။ ဆီဖြည့်ဖို့ဂျီပီအက်စ် ညွှန်တဲ့အတိုင်း ဓာတ်ဆီဆိုင်သွားတော့ ဓာတ်ဆီဆိုင် မတွေ့ ဘဲ ကားတွေလုံးဝမဖြတ်တဲ့ တောလမ်းဆိုတော့ ကြောက်မိသွားတယ်။ ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်က ဥတည်ဗဟို သွားလာနေတဲ့ ကားတွေ မြင်တော့မှ စိတ်အေးသွားတယ်။ နောက်နောင် ဟိုင်းဝေး တစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ မမောင်းတော့ပါလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ လျှပ်စစ်သုံး Telsa ကားနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ခရီးနှင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖတ်ရတော့ အားကျမိပြန်ရော။
လေးအော့ဖ်မှာ၊ ပြည်နယ်အသစ်၊ မြို့ အသစ်၊ အလုပ်အသစ်တွေ ပြောင်းရမှာ တွေးကြောက်ပေမဲ့ အဲဒီလို ပြောင်းရလွန်းတော့ လာထား နင်လားဟဲ့ လောကဓံ ကြောက်တော့ဘူး ပြေးတွေ့ ပလိုက်တယ်။ နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုတော့ ကြောက်မိတယ်။ စာမေးပွဲကျမှာ ကြောက်ပေမဲ့လည်း စာမေးပွဲတွေ ခဏခဏ ဖြေရ၊ အမှတ်နည်းသွားလိုက်၊ ကပ်အောင်ရုံပဲအောင်၊ အမှတ်များများနဲ့ အောင်လိုက်နဲ့ပတ်ချာလည် လိုက်နေတာ ခုတော့ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်။ ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုလည်း လက်ခံနိုင်လို့စာမေးပွဲပါး ဝသွားပြီ ဆိုပါ။
ဆရာတော် မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ရဲ့လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက် စာအုပ်ဖတ်ပြီး နောက်ဘဝ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ရောက်မယ်မှန်းမသိ တွေးကြောက်မိတယ်။ အဖေ၊ အမေ သေသွားမှာ တွေးကြောက်လို့ငိုတယ်ဆိုတဲ့ အသိအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်ကို မကြီးက သူလည်း အဲဒီလို တွေးကြောက်တယ်တဲ့။ ကျွန်မကတော့ နာဂစ်တိုက်တုန်းက တစ်ခါပဲ တွေးပူမိတယ်။ အကြီးဆုံးတွေကသာ အဲလိုလို ကြံဖန်တွေးပူတတ်တယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ ညီမလေး နှင်းနဲ့ မာယာက သိကြောက်နဲ့ မသိကြောက် ဘယ်အရာကို ပိုကြောက်သလဲလို့မေးခွန်းလေး မေးပြီး တဂ်လာတာ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မ ကြောက်တာတွေကိုပဲ ရေးလိုက်တယ်။ တဂျီးမင်းပို့ စ် ဖတ်ရတော့ သိကြောက်က ပိုကြောက်စရာ ကောင်းသား။ သိကြောက်ရော၊ မသိကြောက်ရော အားလုံးကြောက်တဲ့ ကြောက်တတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်း။
မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၄။
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ - ၃
အမေက မောင်မောင့်ကို မွေးပြီးကတည်းက ကလေးတွေကို စိတ်ကုန်သွားတာ သူ့ တူ၊ တူမတွေကို ကျွှေးစရာရှိကျွှေး၊ ပေးစရာရှိ ရော့ အင့် ပေးပြီး အနားကို အကပ်မခံတော့ဘူး။ မောင်မောင့်စာအုပ် ဖတ်ပြီးတော့ အဖေ တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲသွားရှာတယ်။ ပဲပင်ပေါက် မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ လက်ရေး၊ မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှားအယွင်းတွေကို မြင်ရတော့ မင်းကွာ ဆယ်တန်းအောင်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖြစ်နေပြီ မင်းဟာက အလယ်တန်းကျောင်းသား အဆင့်လောက်တောင် မရှိပါလားကွ။
ဆိုင်ကယ်မောင်း သင်ပေးတော့ မောင်မောင်က တညနေတည်းနဲ့တတ်ပေမဲ့ ကျွှန်မတို့ ကို နှစ်ပတ်လောက် သင်ပေးရတယ်။ မနက်စောစော လူရှင်းတဲ့အချိန် ဆိုင်ကယ်မောင်းကျင့်ဖို့အဖေက နှိုးတတ်သလို ညနေစောင်း သောင်ပြင်ထက်ဆီမှာ ကျွှန်မတို့ညီအစ်မတွေ ဆိုင်ကယ်မောင်းကျင့်ရင် မောင်မောင်က စိတ်မရှည်ပေမဲ့ အဖေကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ကြည့်ညွှန်ကြား ပေးတတ်တယ်။ကျွှန်မတို့မောင်နှမသုံးယောက်ကို စက်ဘီးစီးတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တာလည်း အဖေပါပဲ။
ပွဲရုံသွားမယ်ဆိုတိုင်း အိမ်နေရင်း ဝတ်တဲ့ စွပ်ကျယ်၊ အရောင်မထွက်တဲ့ မွဲပြာပုဆိုး ဝတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့နည်းနည်းကောင်းတာလေး လဲဝတ်ဖို့အမြဲဆူရတယ်။ ပွဲရုံမှာက ကိုယ့်နယ်သားတွေကြီးပဲဆိုတော့ အမေက သူ့ သားကို စုတ်တီးစုတ်ပြတ် ဘယ်မြင်ချင်ပါ့မလဲ။ မင်းကို ငါ့သားလို့မထင်ဘဲ မသိတဲ့သူတွေက အိမ်က အလုပ်သမားလို့ ထင်ကြလိမ့်မယ်။ အင်္ကျီလဲခိုင်းတာ ဘယ်လိုပြောပြော မရဘူး။ ဟော... ညနေ စာအုပ်ဆိုင်သွားတော့ ရှိုးစမိုး အပြည့်။ အဲဒီလို အဲဒီလို အချိုးမပြေတာ။
သားကြီးသြရသတွေဆို သိတတ်လိမ္မာကြတာ များလေတော့ မောင်မောင်သာ သားကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သိတတ်လိမ္မာလေမလားတော့ မပြောတတ်ပါ။ ခုတော့ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်၊ အလိုလိုက်ခံရတော့ မသိတတ်ဘူး။ မောင်နှမတွေ ရန်ဖြစ်ကြရင် ကျွှန်မတို့ တွေက တဖက်၊ မောင်မောင်က တယောက်တည်း ဖြစ်လေတော့ တကယ်လို့ များ ကျွှန်မအထက်က အစ်ကိုသာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိခဲ့ရင် အစ်ကိုဖြစ်သူက ညီဖြစ်သူကို ဆုံးမလေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ပေါင်းနှိပ်စက်လို့ကျွှန်မတို့ တွေ ခေါင်းမွှေး ပိုပြောင်လေမလား။
ကျွှန်မတုို့ တွေက မောင်မောင့်ကို နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်စေချင်တာ။ ဒါမှ ပိုက်ဆံတန်ဖိုး သိမှာလို့ ။ အသုံးမကျဘူး၊ အဖြစ်မရှိဘူးလို့ကျွှန်မတို့ တွေ ပြောကြပေမဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ သူက ဆရာကြီး။ ကျွှန်မ ဘွဲ့ ယူဖို့အဖေနဲ့ အမေ ခြင်္သေ့ကျွှန်းကိုလာတော့ အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်းပါးပါး ပြောဖို့မောင်မောင့်ကို ခေါ်လာတာ ဒင်းက ရက်စ်၊ နိုး၊ အိုကေ၊ သင့်ခ်ယူ၊ ဆောရီး ဒီငါးလုံးပဲ သိတယ်။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းကို ပြန်ဝင်ဖို့ဗီဇာထပ်လျှောက်ရမှာမို့ကျွှန်မက နေသိပ်မကောင်းတဲ့ အမေ့ကို အဖော်ပြုရင်း ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာ ကျန်ခဲ့ပေမဲ့ သူတို့ သားအဖတွေက မလေးရှားနိုင်ငံ ကွမ်လာလမ်ပူကို သွားလည်ကြတယ်။ ၂၀၁၂ အဖေ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာကို ဘန်ကောက်က ဘာမင်ဂရမ်ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်တော့ မောင်မောင် ပါပြန်တယ်။ ခု ကျွှန်မ ဘွဲ့ ယူဖို့အဖေ၊ အမေတို့ ကို ယူအက်စ်ကို အလည်ခေါ်မဲ့ အကြောင်းပြောကြရင် အဖေ့သားကို မခေါ်ခဲ့နဲ့သူ့ အရည်အချင်းနဲ့ သူ လာပါစေလို့ ။
ခုများတော့ အစ်မတွေကြောင့် နိုင်ငံခြား လည်ရတယ်။ လူမစွမ်း နတ်မတယ်လို့ဆိုရမလား။ ဒီကောင်က အစွမ်းအစသာ မရှိတာ သူ့ ကံကိုတော့ ယှဉ်လို့ မရဘူးလို့ကျွှန်မတို့ တွေ မနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ အဖေ့သား အသုံးမကျဘူးလို့ကျွှန်မတို့ တွေက ပြောရင် သူ့ သားက သူများတွေထက် အပုံကြီးသာတယ်လို့အဖေက ကွယ်ရာမှာ ရှာကြံချီးမွှမ်းရှာတယ်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ် အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဂျီတီစီတက်ပြီးမှ အရက်သမားလုံးလုံး ဖြစ်သွားသူတွေ၊ အလုပ်မလုပ်၊ ဝေလေလေ ဝါးလားလား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ဘီယာဆိုင်ထိုင်၊ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်တွေ များသား။ ကျွှန်မတို့ လောက် မကြိုးစားပေမဲ့ သူတို့ နဲ့ ယှဉ်ရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ မောင်မောင့်ကို တော်တယ်လို့ ဆိုရလေမလား။
စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ အဖေ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ကင်ဒယ်ဖိုင်းရား ဝယ်ပေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အိုင်ပက်မီနီ မပေါ်သေးဘူး။ အဖေက ခရီးသွားတုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ၊ ကျွှန်မတို့ဓာတ်ပုံတွေကို လာသမျှလူတွေကို ပြရတာ အမော။ အဖေ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ကျွှန်မက ဝမ်းသာမဆုံး။ ကင်မရာအသစ်ဝယ်တော့ ကင်မရာအသေးကို အဖေ့ဆီ ပို့ လိုက်တယ်။ ကင်မရာ မသုံးတတ်တဲ့ အမေ့ကို ကင်မရာရိုက်တတ်အောင် အဖေ သင်ပေးလိုက်နော်။ ကင်မရာရိုက်တာ လွယ်လွယ်လေး ဘာမှမခက်ဘူး။ ခလုတ်ကလေး နှိပ်ရုံပဲ။ ဓာတ်ပုံများများရိုက်ခဲ့လို့မှာနေတာ ကင်မရာ မယူသွားဘဲ ဂိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ အန်ကောဝတ်ရှေ့ က တပုံတည်းသော ဓာတ်ပုံသည်သာလျှင် အမေ့ရဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားခရီးစဉ် အမှတ်တရအဖြစ် တွေ့ ရတယ်။
ဟိုတလောကမှ မကြီးက စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခု ပြောရဦးမယ် ကင်ဒယ်ဖိုင်းရား ပျောက်သွားပြီ။ ပျောက်သွားတာ ကြာပြီ နင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့မပြောဘဲ ထားတာတဲ့။ သူတောင် မကြာသေးခင်ကမှ သိတာ။ ဘာလိုပျောက်တာတုန်းဆိုတော့ မောင်မောင် ကားပေါ်တင်ထားတုန်း ပျောက်သွားတာတဲ့။ အဖေ့အတွက်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းက ဘယ်လိုလုပ် သူ့ လက်ထဲ ရောက်နေတာတုန်း။ အဖေကိုင်ဖို့ပေးတာလေ သူ့ ကိုင်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ အဖေပစ္စည်း သူ့ ပစ္စည်းပေါ့ဟာ။ စိတ်တိုလိုက်တာ မပြောပါနဲ့ တော့။ ဒီကောင် ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ ကောင်းကျိုးမပေးဘူး။ အမြဲဒေါသထွက်စေတယ်။
ခု အိုင်ပက်အဲပေါ်တော့ အိုင်ပက်မီနီ ဈေးကျနေတာ အဖေ့အတွက် ဝယ်မလား စိတ်ကူးတယ်။ မကြီးနဲ့တိုင်ပင်တော့ ဘာမှ မဝယ်ပေးနဲ့ ဟေ့။ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတခု ထပ်ပြောရဦးမယ်။ ကင်မရာ ပျောက်သွားပြီ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့အဖေ့နှလုံးထဲကို ပိုက်ထည့် ခွဲစိတ်ထားတာ တစ်နှစ်ပြည့်လို့ချက်ကပ်လုပ်ရတော့ အဖေ၊ အမေ၊ မကြီးယောက္ခမ၊ မကြီးတို့ စုံတွဲ ဘန်ကောက်မှာ ဘုရားလည်းဖူး လိပ်ဥလည်း တူးကြတယ်။ မကြီးက အဲဒီကတည်းက သံသယ ဝင်မိသားတဲ့။ အမေ့ကို မေးကြည့်တော့ မောင်မောင့်အိတ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့လိုလို၊ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်နေတယ်တဲ့။ ခုမှ မောင်မောင့်ကားပေါ်မှာ ပျောက်သွားတာတဲ့။
မောင်မောင်က ဘယ်လောက်လဲ ပြန်ဝယ်ပေးမယ်လေတဲ့။ အဲဒါ သူဝယ်တုန်းက စင်းဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးရတယ်ဆိုတော့မှ အမ်..တဲ့။ ဒေါသထွက်လိုက်တာ အဖေ့ကို ဝယ်ပေးသမျှ သူက မောင်ပိုင်စီးပြီး ဖျောက်ပစ်တာ။ အနားမှာ ရှိလို့ ကတော့ လည်ပင်းညှစ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒီကောင့်ကို ဘာဆိုဘာမှ မဝယ်ပေးတော့ဘူး။ သူ့ အတွက် ဝယ်ထားတဲ့ ဇာရာက အင်္ကျီကိုလည်း မပေးနဲ့ တော့။ ကင်ဒယ် ဖျောက်ပစ်လို့စိတ်တိုနေတုန်း ကင်မရာ ဖျောက်ပစ်ပြန်ပြီ။ ဒေါသထွက်လွန်းလို့အိပ်လို့ တောင် မပျော်ဘူး မုန်းလိုက်တာ။
ဒီကောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက စည်းကမ်းမရှိတဲ့ကောင်။ ကျောင်းစာအုပ်တွေ အမြဲနှစ်စုံ ဝယ်ရတယ်။ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ ပေတံ ပျောက်တာလည်း ခဏခဏ ။ ကျွှန်မတို့ တွေဆို ပစ္စည်းတော်တော် ရိုသေတယ်။ ပျောက်ခဲတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖိနပ်ကို ညီညီချွှတ်ဖို့ ၊ အဝတ်တွေကို အဝတ်ခြင်းတောင်း ထည့်ဖို့ဘယ်လိုပဲ ဆုံးမသွန်သင် ပြောနေတုန်း လုပ်တယ် မပြောရင် မလုပ်ဘူး။ အမေက မောလွန်းလို့မပြောတော့ဘူးတဲ့ သူ့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်တယ်။ ကျွှန်မကတော့ မလုပ်မချင်း တရစပ်အော်တော့ နားညည်းလို့ တဲ့ ထလုပ်တယ်။
အစ်မတစ်ယောက်ကို ကင်ဒယ်ဖျောက်ပစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ သူ့ အမေဆို အသက် ၆၀ အရွယ် ခုထိ ထီးအမြဲပျောက်တုန်း။ တစ်ချောင်းပြီးတချောင်း ပျောက်တာ ထီးများ စားပစ်သလား မှတ်ရတယ်တဲ့။ ပျောက်တတ်ပါတယ်ဟယ်လို့ဖျောင်းဖျသေးတယ်။ ကင်မရာ ဖျောက်ပစ်ပြန်ပြီ အစ်မရေ ဆိုတော့ သူလည်း မဖျောင်းဖျနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ ဟာက ပျောက်တာရော ဟုတ်ရဲ့ လားဟယ် သူ့ ကောင်မလေးများ ပေးပစ်လိုက်သလားတဲ့။ သူ့ ကောင်မလေးကို ပေးပစ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီကလေးမလေးက အရမ်းအေးတယ်။ သူ့ မိဘတွေက အဖေနဲ့မောင်နှမတွေလို ကြီးပြင်းခဲ့တာ။ သူ့ ဦးနှောက်ထဲ တခုခု မှားနေသလိုပဲ၊ ဘာလို့ဒီလောက် ဘရန်းမှန်း၊ အသုံးမကျမှန်း မသိတော့ဘူး ။ အဖေ့သားသာဆိုတယ် အဖေနဲ့ တစက်ကလေးမှ မတူဘူး။
ကလဲရားကို ပြောပြတော့ ဘရန်းမမတွေရဲ့ မောင်ပဲ ဒီလောက်တော့ ဘရန်းတော့ပေမပေါ့။ တို့ များ ဘရန်းတာ သူ့ လောက် မဆိုးဘူး။ ဘာလို့ဒီလောက် လိတ်တက်မှန်း မသိတော့ဘူး။ အဲဒါ သူတောင်းသမျှ ဝယ်ပေးတဲ့ မင်းတို့ အစ်မတွေနဲ့မင်းအဖေကြောင့်။ သူ ပြောတော့မှ ကိုယ့်ပေါင်ကုိုယ်လှန်ထောင်းတဲ့ ကျွှန်မ ပါးစပ်ကို ပိတ်ရော။ သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း။ မကြာသေးခင်က မောင်မောင် မင်္ဂလာဆောင်တော့ ဒင်း ဖျောက်ပစ်လိုက်တဲ့ ကင်ဒယ်နဲ့ကင်မရာကို မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ အဖြစ် လက်ဖွဲ့ တယ်လို့ ပြောတော့ အဖေက ဒီလိုလည်း ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ လေသံပျော့လေးနဲ့ဖျောင်းဖျရှာတယ်။
နောက်ဆိုးပေကြီး တစ်ယောက်က တခြားသူ ဟုတ်ရိုးလား။ အဲဒီဆိုးပေလောက် မဆိုးပေမဲ့ အဲဒီဆိုးပေလောက် နီးနီးဆိုးတဲ့ ဆိုးပေကြီးရဲ့အစ်မ... ဆိုးပေလေးး) ။ အဖေ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက အဖေ့အမေ ဆုံးသွားလို့မိတဆိုးလေး အဖေ့ကို သူ့ အဒေါ်တွေက ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြတယ်။ နောက်တော့ ဘိုးဘိုးက ဗမာပြည် (ဧရာဝတီတိုင်း) တက်လာတယ်။ ရွှံ့ တွေဗွက်တွေနဲ့တနေကုန် လယ်ထဲမှာ နွှားနှစ်ကောင်နဲ့ ရုန်းကန်ရပေမဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲ စားလောက်ရုံပဲဆိုတော့ အဖေက စီးပွားရှာဖို့ဘိုးဘိုးရှိတဲ့ ဗမာပြည်ကို လိုက်လာတယ်။ သူ့ နောက် လိုက်မလာရင် ခုလောက်ဆို ကျွှန်မတို့ တွေတော့ လယ်ထဲ ထမင်းတောင်း ပို့ နေရပြီလို့သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ လေသံနဲ့ ဘိုးဘိုးက ပြောတတ်တယ်။
ခြံထဲမှာနေရင် ဆိုင်က ယူသွားတဲ့ ဆန်အိတ်၊ မီးသွေးအိတ်ဖိုးတွေကို အဖေက ရှင်းရတဲ့အပြင် လစဉ်ထောက်ပံ့တယ်။ အဖေက အသားညိုညို ၊ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်၊ ဘိုးဘိုးက ဖြူဖြူနုနု၊ ပုပု အလှကြိုက်။ ကျွှန်မတို့ အိမ်ကို လာတဲ့ အမျိုးတွေမှာ ညိုညိုပိန်ပိန် ရှည်ရှည်ဆိုရင် အဖေ့အမျိုးတွေ၊ ဖြူဖြူပုပု လုံးလုံးတွေက အမေ့အမျိုးတွေ။ ဘိုးဘိုးက အဖေ ပေးသမျှ ပိုက်ဆံကို နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ထိုးပစ်တယ်။ စားဖို့ သောက်ဖို့ ၊ ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ လှုဖို့ တန်းဖို့အဖေက အကုန်ထောက်ပံ့တာ။ ဘိုးဘိုး ဘာလို့ နှစ်လုံးထိုးတာလဲမေးရင် လှုတန်းဖို့ တဲ့။ အဖေ သူ့ အဖေနဲ့တစက်ကလေးမှ သွားမတူတာ ကျွှန်မတို့ တွေအတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ အဖေသာ သူ့ အဖေ ကျွှန်မတို့ အဘိုးနဲ့တူခဲ့ရင် ကျွှန်မတို့ တွေ ခုလို အေးအေးချမ်းချမ်း နေရမယ် မထင်ဘူး။
အဘိုး စားပြီးပြီလား ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲလို့မေးရင် ငှက်ပျောသီး၊ သကြားနဲ့ စားတယ်လို့ဖြေတတ်တယ်။ မသိတဲ့လူဆိုရင် ကျွှန်မတို့ က ဘာမှမကျွှေးဘဲ ထားတယ်လို့ထင်ကြမယ်။ တယောက်အကြောင်း တယောက်သိကြတဲ့ တရွာတည်းသားတွေမို့ သာ တော်တော့တယ်။ ဘိုးဘိုးက အဲဒီလို လူ့ ဂွစာ။ ကျွှန်မ ချက်တဲ့ ဟင်းဆိုရင် ဘိုးဘိုးက မတို့ မထိ ဟင်ခနဲ မျက်နှာလွဲနေတယ်။ အဖေကတော့ ကောင်းတယ် ဆားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက် ဟိုဟာလေး ပြင်လိုက်နဲ့အားပေးတတ်၊ သင်ပေးတတ်တယ်။
ဘိုးဘိုးရဲ့အကောင်းမပြောတတ်တဲ့ ဗီဇလေးက မောင်မောင့်ဆီမှာ ပါလာပုံရတယ်။ တခါတုန်းက အိမ်အကူလုပ်ပေးတဲ့အစ်မက ကြာဇံချက် ချက်တာ မောင်မောင်က မြည်းကြည့်ပြီးတော့ မကောင်းဘူးတဲ့။ နေ့ လည် အိုးလည်း ဖွင့်ကြည့်တော့ လား...လား ပြောင်သလောက် ဖြစ်နေပြီ။ မကောင်းဘူး ဆိုပေလို့ သာပဲ ကောင်းများကောင်းရင် အိုးပါ ကိုက်စားပစ်မလားမသိ။ ကျွှန်မ နယ်ကိုရောက်နေရင် ရန်ကုန်မှာ မကြီး တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်မှာစိုးလို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဘိုးဘိုးကုို ရန်ကုန်လွှတ်တယ်။ ရန်ကုန်တိုက်ခန်းတွေက ထောင်လိုပဲတဲ့။ စကားပြောဖေါ်မရှိ၊ ကားလမ်း ကူးဖို့ ခက်တယ်။
လမ်းထဲက ပင်စင်းစား အဘိုးကြီးတွေ ဗာဓံပင်အောက်မှာ ရေနွေးကြမ်းတအိုးနဲ့နိုင်ငံရေး၊ သာရေး၊ နာရေး လေကန်ကြရာမှာ ဘိုးဘိုးလည်း ပါတယ်။ ဘိုးဘိုးက ထမင်းဆိုရင် ကျောက်ခဲလောက် မာမှ စားတယ်။ ပျော့လို့ ကတော့ လုံးဝမစားဘူး။ ထမင်းဟင်းတွေကို ပူပူလောင်လောင်မှ စားတယ်။ ရေနွေးကြမ်းဆိုလည်း ခါးတူးနေမှ သောက်တာ။ ရုံးပတီသီး အတာင့် ၂၀ ဝယ်ရင် ဆယ်တောင့်ကို မကြီးက ပုဇွှန်နဲ့ ကြော်တယ်။ ဆယ်တောင့်ကို ဘိုးဘိုးက ငါးပိနဲ့ အိုးကပ်ချက်တယ်။ ဆေးတံသောက်တယ်။ ကျွှန်မတို့ တွေ ဆေးတံနံ့မခံနိုင်မှန်းသိတော့ အပြင်မှာသောက်တယ်။ အမေ့ဖက်က အဘိုးရှိပေမဲ့ အတူမနေတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မတည့်အတူနေတဲ့ ဒီအဘိုးကိုပဲ ကျွှန်မတို့ တွေက အဘိုးလို့ မှတ်ကြတယ်။
ဘိုးဘိုးက မြေးဦးလည်းဖြစ် ပြန်မပြောတဲ့ မကြီးကို အချစ်ဆုံး။ ဝါတွင်းဥပုသ်နေ့ မှာ ဘိုးဘိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ဥပုသ်သွားစောင့်ရင် လှုဖို့ တန်းဖို့ဘယ်လောက်ပေးလိုက်ပါလို့အဖေက ဖုန်းဆက်ရင် ကျွှန်မက ပေးရတယ်။ ပိုက်ဆံယူရင်း မင်း အဖေက ဘယ်လိုမကောင်းတာနဲ့ပြောနေတာ သည်းခံနားထောင် နေသေးတယ်။ မကြီးဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်မပြောဘဲ နေပါလိမ့်မယ်။ လူပုစိတ်တို ကျွှန်မက သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ နောက်ဆုံး စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပြောလိုက်တာက "အဖေက ဘိုးဘိုးသား မဟုတ်ဘူးလား...အဖေ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သမီးတို့အသိဆုံး...နောက်နောင် သမီးရှေ့ မှာ သမီးအဖေ မကောင်းကြောင်း ဘယ်တော့မှ လာမပြောနဲ့ " ဆိုပြီး ဆောင့်ဆောင့်နဲ့ခြေဆောင့်ပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားတော့တာပဲ။
အဲဒီကတည်းကစလို့ဘိုးဘိုးက ကျွှန်မကို စကားဟဟ မပြောတော့ဘူး။ နှာကစ်သွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ လူကြီးတိုင်းလည်း မှန်တာမှ မဟုတ်တာနော့။ စိတ်ဆိုးလွန်းလို့အဖေ့ဆီ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး "အဖေ့အဖေကလေ သမီးအဖေကို မကောင်းဘူး ဆိုးတယ်တဲ့။ သမီးလည်း စိတ်ဆိုးလွန်းလို့နောက်နောင် သမီးရှေ့ မှာ သမီးအဖေ မကောင်းကြောင်း ဘယ်တော့မှ လာမပြောနဲ့ လို့ပြောပစ်လိုက်တယ်" ။ သမီးဖြစ်သူက သူ့ အဖေ ကျွှန်မတို့ အဘိုး အကြောင်း လှမ်းတိုင်တော့ အဖေ့ခမျာလည်း ဒီအဖေရယ်၊ ဒီသမီးရယ်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရှာမယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ ဘိုးဘိုးကို ဘာလို့ ပြန်ပြောရတာလဲလို့အမေ ဆူတာ ခံရသေးတယ်။
အစ်မဝမ်းကွဲ မင်္ဂလာဆောင်တော့ သူ့ ယောက္ခမတွေက ဆွေပြမျိုးပြအဖြစ် ကျွှန်မတို့ မြို့ ကို လိုက်လည်ကြတယ်။ ပုသိမ်တက်မဲ့ ရှပ်ပြေး (အထူးအမြန်ရေယာဉ်က) မနက် ၅ နာရီထွက်တယ်။ မနက် ၄ နာရီခွဲလောက်ကတည်းက သင်္ဘောဆိပ်ကို ကြိုရောက်ရတယ်။ သူ့ ယောက္ခမရဲ့ အိတ်က သူ့ အိတ်နဲ့ တူတယ်လို့တွေးမိတော့ ငါ ဥစ္စာခြောက်တာ ဖြစ်မှာပါလေလို့အစ်မက ဖေ့ါတွေးတယ်တဲ့။ နောက်တော့မှ သိတယ် သူ့ ယောက္ခမ သူ့ အိတ်နဲ့မှားယူသွားမှန်း။ ငါ့ ယောက္ခမက စိတ်ရင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့လမ်းလျှောက်တာလည်း ပျာရိပျာယာ၊ စကားပြောတာကလည်း ဘာတွေပြောမှန်းမသိ၊ အိနြေ္ဒကို မရဘူး။ ပြီးတော့ အိတ်ကိုလည်း မှားဆွဲသွားသေးတယ်၊ တကယ့်ကို ကသမ်းကရမ်းပါပဲအေ။ အဘိုးအဘွားတွေမှာ ပါတဲ့ဗီဇတွေက သားသမီးလက်ထက်မှာ မပေါ်ရင် မြေးလက်ထက်ကျရင် ပေါ်တတ်တယ်တဲ့။ အစ်မလည်း ကသမ်းကရမ်းယောက္ခမရဲ့မြေး ကသမ်းကရမ်လေးတွေ မွေးတော့မှာပေါ့လို့ကျွှန်မတို့ တွေ စကြနောက်ကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဆိုးဆိုး ကျွှန်မတို့ တွေရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ခြစ်...အဲလေ ချစ်လှစွာသော မောင်လေးဆိုတော့လည်း မောင်မောင်ကြိုက်လောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ တွေ့ ရင် မကြီးက သူလည်းဝယ်ပေး၊ ဒါလေး မဆိုးဘူး နင် ဝယ်ပေးလိုက်လို့မောင်မောင့်ကို အမြင်ကပ်နေတဲ့ ကျွှန်မကို တိုက်တွန်းတတ်သေးတယ်။ သူ မကြိုက်ရင် တခြားသူကို ပေးပစ်တာ၊ တန်ဖိုးမထားတာတွေက သူ့ အပိုင်းပေါ့လေ။ ကသမ်းကရမ်း မောင်လေးက မွေးလာမဲ့ ကသမ်းကရမ်း တူ၊ တူမလေးတွေရလို့ကျွှန်မလည်း မကြာခင် ကသမ်းကရမ်း အဒေါ်ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ဆိုးပေကြီးရဲ့ရင်သွေးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ကျွှန်မတို့ ရဲ့မျိုးဆက်သစ် မျောက်မူးလဲ၊ ကြောင်အီးပူကလေးတွေအတွက် မောင်မောင်က မတောင်းဆို မပူဆာတာတောင် ကျွှန်မတို့ တွေကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား စိတ်ပါလက်ပါ လျှော့ပင်းနေလေမလားတော့ မပြောတတ်ပါ။
မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၄။
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ - ၂
အမေက အဖေ့လို စကားသိပ်မပြောဘူး။ ငါ့အိမ်ရိပ်တောင် မနင်းရဘူးဆိုရင် တကယ်မနင်းရတာ။ ကျွှန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တခုခုလိုချင်ရင် အဖေ့ကို နည်းနည်းလေး နားပူနားဆာ လုပ်ရုံနဲ့ ရတယ်။ အမေကတော့ လုံးဝပဲ ဈေးလိုက်ခဲ့ချင်ရင် ဘာမှမပူဆာရဘူးလို့မလိုက်ခင်ကတည်းက တခါတည်း ပြောထားတယ်။ အမေ့ဆီမှာ ပူဆာရတာ ကျောက်ခဲဆီကနေ ရေထွက်အောင် ညှစ်ရသလိုပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပူဆာပူဆာ သင့်တော်တဲ့အချိန်မှ ပေးတယ်။ သင်္ကြန်၊ သီတင်းကျွှတ်၊ တပေါင်းလပွဲတွေမှာ အင်္ကျီသစ်သုံးထည် ချုပ်ပေးတယ်။ အင်္ကျီကို ဘယ်တော့မှ ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိ မချုပ်ပေးဘူး။ နည်းနည်းကြီးကြီး ချုပ်ပေးထားတော့ နောက်နှစ်အထိ အဲဒီအင်္ကျီက တော်နေသေးတယ်။ မြို့ရောက်ပြီဆိုတော့ အဝတ်အစားသစ် လိုတယ် အမေရေလို့မှာလိုက်တာ စကပ်နှစ်ထည် ပို့ ပေးတယ်။ သူငယ်ချင်းက ဟဲ့ နင့် စကပ်က ကြီးလားချည်လားတဲ့။ ငါ့အမေက ငါ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိ ဝတ်လို့ ရအောင် တခါတည်း အပြီးချုပ်ပေးလိုက်တာ။ တကယ်လည်း တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိ တော်နေသေးတယ်။ အမေတို့ များ အဲဒီလို စေ့စပ်သေချာတာ။
အမေ ကြိမ်းတော့ မောင်မောင်က အဲဒီကောင်မလေးကို မယူပါဘူး။ အမေ ပေးစားတဲ့သူကိုသာ ယူပါ့မယ်ဆိုပြီး ငိုသတဲ့။ ထစ်ခနဲဆို မျက်ရည်အရင်ထွက်တာ မောင်မောင်က ကျွှန်မနဲ့ တူတယ်။ မကြီးက မျက်ရည် လုံးဝမကျဘူး။ အဖေက မင်းကောင်မလေးက မင်းကို ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွ ငါ့ကို ကြိုက်တာကွ။ ဆိုလိုချင်တာက မောင်မောင်က ရုပ်ရည်၊ ပညာလည်း မဆိုး၊ အသောက်အစားလည်း ကင်း၊ မိဘဘက်ကရောင်းကလည်း မဆိုးဆိုတော့ သမက်တော်ချင်သူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်။ အဖေ့သားဆိုတာကြီး ဖယ်လိုက်ရင် သားမက်တော်ချင်တဲ့သူ ဒီလောက်များမယ် မထင်။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ မှ ဟိုင်းကြီးကို မပြန်ရလို့အမိန့် ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် မောင်မောင် ရန်ကုန်ကို ရောက်လာပြန်ရော။
သင်္ဘောသားသင်တန်းတက်ပြီး သင်္ဘောလိုက်မယ်ဆိုတော့ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေက ဒီကောင် ကောက်ရိုးမီး ဘယ်တော့များ ဟုန်းခနဲ ငြိမ်းသွားမလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတာ။ တကယ်ပဲ တက်ချင်လို့ လား၊ မဖြစ်မနေ လုပ်ရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ပဲလားမသိ။ ကောက်ရိုးမီးလေးက ဆီးမီးခွက်က မီးတောက်လေး ဖြစ်နေတယ်ဟလို့ကျွှန်မတို့ တွေ လက်ခမောင်း ခတ်ကြပြန်ရော။ သဘောင်္သားအရာရှိ စာမေးပွဲကို ဘွဲ့ ရမှ ဖြေလို့ ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာမို့ အဲဒီတော့မှ ဘွဲ့ လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းပြန်တက်ပါလေရော။ ဟုတ်ပါတယ် ဘွဲ့ ဆိုတာ သုံးစားလို့ မရဘူး ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဓာတ်ပုံချိတ်ဖို့ဆိုပေမဲ့ လူတိုင်းဘွဲ့ ရနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘွဲ့ လေးတစ်ခုတော့ မရသင့်ဘူးလား။ အသုံးမဝင်ဘူး ဆိုပေမဲ့ ဟော..ခုလို အသုံးတည့်တဲ့ နေရာလည်း ရှိပြန်ရော။
အဖေနဲ့ မောင်မောင်က ဘောလုံးပွဲ ဝါသနာပါတယ်။ ဘောလုံးဂျာနယ် လပေးဖတ်တယ်။ နယ်အိမ်ရော၊ ရန်ကုန်အိမ်ရော ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့စလောင်းတပ်တယ်။ ကမ္ဘာ့ဗိုလ်လုပွဲတွေ၊ EPL ဗိုလ်လုပွဲ၊ သန်းတိုးအောင်၊ မျိုးလှိုင်ဝင်း ပါတဲ့ မြန်မာဘောလုံးအသင်းနဲ့ထိုင်းအသင်း ဗိုလ်လုပွဲဆို ဘာပြောကောင်းမလဲ တရပ်ကွက်လုံး ကျွှတ်ကျွှတ်ညံ။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်ရဲ့အသည်းကို ခွဲသွားတာ ကိုင်တီဆတ်ဆိုတဲ့ ခပ်ချောချော ထိုင်းရှေ့ တန်းတိုင်းစစ်မှုး။ ခု ထိုင်းအသင်း နည်းပြဖြစ်နေတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကွင်းရဲ့ဟုိုဖက်ဒီဖက် ပြေးနေတဲ့ ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကို လူအယောက် ၂၀ ကျော်က ဝိုင်းလုကြတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကို မိသားစု အတူတကွ ကြည့်ကြတဲ့ အချိန်တွေက ပျော်ဖို့ ကောင်းသား။
ထောင့်ကန်ဘော၊ ပြစ်ဒဏ်ဘော ဘာကြောင့်ပေးရတယ်ဆိုတာ အဖေက ရှင်းပြတယ်။ EPL က ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် အကြောင်းကို မမေးလိုက်လေနဲ့ ။ ဘယ်အသင်းကနေ ဘယ်အချိန်တုန်းက ပြောင်းလာတာ၊ ပြောင်းရွှေ့ ကြေးက ဘယ်လောက်ပေးရတာ၊ ဘယ်အသင်းကို အငှားချထားတာ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လုိုကောင်းတာ အံမယ်လေး သိလိုက်တာ ကျောင်းစာများဆို ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော် ခုတော့ ဘောလုံးဖြစ်နေတယ်။ ကျွှန်မတို့ က သူ ဘောလုံးပွဲလောင်းတာ မကြိုက်ပေမဲ့ လောင်းကြေး မများတော့ မပြောတော့ဘူး။
မကြီးက တိုတို (စင်္ကာပူထီ) ထိုးတယ်။ သုံးလေးကျပ်နဲ့မီလျံနာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကို်ယ့်အတိတ်ကံက ရဖို့ ရှိပေမဲ့ မထိုးရင် ဘယ်ပေါက်ပါ့မလဲဆိုပေမဲ့ ခုထိ တခါမှ ပေါက်တယ်လို့ လည်း မကြားသေးဘူး။ တချိန်ချိန်မှာတော့ မီလျံနာ ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ ။ တချို့ များဆို ကောင်းကောင်းလေးတွေ ကောက်ရ၊ အတန်းထဲမှာ မဲဖောက်ရင် ပေါက်တတ်တယ်။ ကျွှန်မကတော့ အလကားရမဲ့ ကံမပါ၊ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမဲ့ ဇာတာရှင်မှန်း ကိုယ့်ဘာသာသိလို့ လား မသိဘူး ဘယ်တော့မှမလောင်း၊ ထီမထိုးဘူး။ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကုိုယ်ပေါ့လေ။
စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ပြင်နေချိန် မီးခံသေတ္တာထဲက ပိုက်ဆံ ၂ သိန်းလား၊ ၃ သိန်းလား မမှတ်မိတော့ဘူး ပျောက်သွားတယ်။ အိမ်က မီးခံသေတ္တာက ပိုက်ဆံသိမ်းရတယ် မရှိပါဘူး။ ဒီနေ့မြင်လိုက်တယ် နောက်နေ့မရှိတော့ဘူး။ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ သိမ်းဆည်းဖို့ပူပင်တတ်တဲ့ မကြီးကြောင့် ဝယ်ရတာပါ။ ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းက ၁၉ မှာ ခဏထား ညာလှည့် ၄၀ မှာထား ဘယ်လှည့် ။ နည်းနည်းလေး လွဲတာနဲ့ဖွင့်လို့ မရဘူး။ အိမ်မှာ မောင်မောင်နဲ့ကျွှန်မပဲ ဖွင့်တတ်တယ် အဖေ၊ အမေတို့ က မျက်စိမှုန်တာကိုး။ ပိုက်ဆံထုပ် မတွေ့ တာနဲ့တရားခံက မောင်မောင်မှန်း သိတာပေါ့။ အိမ်မှာ တခြားလူမှ မရှိတာ။ သူ့ သူငယ်ချင်းကို ချေးလိုက်တာတဲ့။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေက ဒီကောင် ကလိမ်ကကျစ် သူ့ စကားကို မယုံဘူး။ နောက်တော့ လာဆပ်တယ်လို့ကြားတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာနေလို့ကိုယ်တိုင်ပိုက်ဆံရှာရတော့မှ ပိုက်ဆံတန်ဖိုး သိတယ်။ အဖေ့ပိုက်ဆံ သုံးနေတုန်းကတော့ သိပ်မစဉ်းစားဘူး ပက်ခနဲ ဝယ်လိုက်တာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ရှာတဲ့အခါကျမှ ဝယ်မယ်ဆိုရင် တကယ်ဝတ်ဖြစ်မှာလား၊ အပိုဖြစ်နေမှာလား စဉ်းစားတွက်ချက်လွန်းလို့ဆံပင်တောင်ဖြူမယ်။ ကျွှန်မက မကြီးလောက် မတွက်ချက်၊ မစေ့စပ်ဘူး၊ ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာဆို ဈေးသိပ်မကြီးရင် ဝယ်တယ်။ မကြီးက ဘယ်တော့မှ မူရင်းဈေးနဲ့မဝယ်ဘူး ဒစ်စကောင့်ဆိုမှ ဝယ်တယ်။ တဈေးလုံးပတ်၊ တကယ်သက်သာမှ ဝယ်တယ်။ သူ့ လက်သုံးစကားမှ ဈေးသက်သာချင်ရင် ပင်ပန်းခံရမယ်။ သူဝယ်ထားထာထက် ဈေးလျှော့နေရင် ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။
မကြီးက ဘယ်လိုချင်လဲလို့ မေးရင် ကျွှန်မ လိုချင်တဲ့ အိတ်၊ ဖိနပ်၊ အင်္ကျီလို့မှာလိုက်တယ်။ ဒစ်စကောင့်ချတဲ့အခါ မကြီးက သင့်လျော်ရာ ဝယ်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲ။ ဘယ်တံဆိပ်မှလို့ကျွှန်မက မတောင်းဆိုသလို မကြီး ထည့်ပေးတာတွေ အကုန်ကြိုက်တယ်။ မောင်မောင်ကျတော့ ဝက်ဆိုဒ်ကနေကြည့်ပြီး သားက ဒီဖိနပ် လိုချင်တာလို့ပူဆာတယ်။ အဲဒီဖိနပ်ကို ဆိုင်မှာသွားမေးတော့ စင်္ကာပူကို မဝင်သေးဘူး သြဇီကိုပဲ ဝင်သေးတာတဲ့။ ဒစ်စကောင့်ချလို့ဈေးနှုန်းချိုချို ဒီဇိုင်းလေးက မဆိုး ဝယ်ထည့်ပေးလိုက်ရင် မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ထမင်းချက်လှဋ္ဌေးကို ပေးပစ်လိုက်တယ်။ ကြည့် ဝယ်ပေးချင်စရာ မကောင်းလိုက်ပုံများ။
တောင်းလိုက်ရင်လည်း တကယ့်ဈေးကြီးပေ့ ဘရန်းတွေချည်းပဲ။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မလည်း ဘရန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ပိုဆိုး။ ကျွှန်မတို့ တွေက ဒစ်စကောင့်ဈေးလျှော့ပွဲတွေကို ခြေတိုအောင် လျှောက်နေချိန်မှာ သူက အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တွေကနေ နောက်ဆုံးလိတ်တက် ဆိုတာတွေကို ကြည့်နေတာ။ ဒင်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ရှာတော့မှလား ဘရန်းနိုင်ဦးမလား စောင့်ကြည့်ဦးမယ်။ ခုတော့ အဖေ့ပိုက်ဆံနဲ့ဘရန်းနိုင်သကိုး။ သီတင်းကျွှတ်မှာ အမေ လှုဒါန်းဖို့ ဆိုပြီး ပို့ လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံတစ်သိန်းခွဲကို ဒင်းက ဘုန်းပါလေရော။ ကျွှန်မတို့ညီအစ်မ ဒေါသထွက်လို့ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်တယ်။ အနားမှာဆိုရင် လည်ပင်းညှစ်မိမလားဘဲ။ နင် ဘာအတွက်သုံးတာလဲမေးရင် မမေးပါနဲ့ လို့လေသံပျော့လေးနဲ့ ဖြေတော့ ကျွှန်မတို့ က ဒေါသပိုထွက်လေ။
ခြင်္သေ့ကျွှန်းရောက်တော့ မကြီးက ဖုန်းတလုံးနဲ့SingTel က Prepaid ဝယ်ပေးတယ်။ တလမှ ၂၅ ကျပ်၊ မိနစ် ၆၀၀ လား မသိဘူး ရတယ်။ မသုံးတဲ့မိနစ်တွေကို နောက်လတွေမှာ ပေါင်းထည့်ပေးသွားတယ်။ တွက်ခြေကိုက်တဲ့ ဖုန်းလေး။ သူများတွေက ၂ နှစ် ကွန်းထရပ် လိတ်တက်ဖုန်းတွေ ကိုင်နေချိန်မှာ ကျွှန်မကတော့ ဖုန်းဆက်၊ မတ်ဆေ့လ်ပို့ ၊ ရေဒီယိုနားထောင်လို့ ပဲရတဲ့ ဖုန်းစုတ်လေးကိုင်ပြီး ချွှေတာတယ်။ နောက် စမတ်ဖုန်း ပေါ်လာတဲ့အချိန် လူတိုင်း စမတ်ဖုန်း ကိုင်ချိန်မှာ ကျွှန်မက ဖုန်းစုတ်လေးကိုင်သုံးပြီး ချွှေတာနေတုန်း။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းသူကျွှန်းသားတွေက အင်မတန် ဘရန်း၊ လိတ်တက် မက်တယ်။ လိတ်တက်ကိုင်၊ အယ်လ်ဗွီ ကိုင်မှ အထင်ကြီးတယ်။ လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အကျင့်စရိုက်ထက် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဘရန်းတွေနဲ့တိုင်းတာတယ်။
မကြီးတောင် ခြင်္သေ့ကျွှန်းရောက်တာ အတော်ကြီးကြာပြီးတော့မှ စမတ်ဖုန်းကိုင်တယ်။ ကျွှန်မတို့ ရဲ့ဘရန်းကြီး မောင်မောင်လည်း မြန်မာပြည်ကို အိုင်ဖုန်းဝင်တာနဲ့ဘယ်နေပါ့မလဲ။ အများတကာတွေက ၁၆ ဂစ် ကိုင်တာကို သူက ၃၂ ဂစ်။ ဖုန်းတလုံးမှာ မန်မိုရီ ဒီလောက်အများကြီး မလိုဘူး။ မန်မိုရီများများလိုချင်ရင် External HardDisk ဝယ် 500 G ကိုမှ တရာပေးရတယ်။ ဖုန်းကို မန်မိုရီ နည်းနည်းပဲဝယ်လို့အကြံပေးတာကို ဘယ်လိုမှ လက်မခံဘူး ။ သူ ဝယ်ချင်တာဝယ်တယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက ယူအက်စ်ရောက်တာ ၂ နှစ်ရှိပြီပေမဲ့ ကျွှန်မက Prepaid ဖုန်း သုံးနေတုန်း။ အလုပ်ဝင်နေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ဖုန်းသိပ်မပြောတဲ့ ကျွှန်မက တလတလ ဖုန်းခအများကြီး ပေးရမှာကို နှမြောလို့ ။
အိုင်ဖုန်းတွေ ယူအက်စ်မှာ ဘယ်ဈေးပေါက်လဲလို့မေးရင် ကျွှန်မက ဘာမှမမေးနဲ့ငါ သုံးလည်းမသုံးဘူး၊ သိလည်းမသိဘူးလို့ပိတ်ပြောပစ်လိုက်ရော။ အဝေးကြီးမှာနေတဲ့ ကျွှန်မက သူ့ ဒဏ်က လွှတ်ပေမဲ့ နီးတဲ့မကြီးက သူ နားပူနားဆာလုပ်တာ အခံရဆုံး။ သူ့ အတွက်တင် မကဘူး၊ သူ့ သူငယ်ချင်းအတွက်ပါ ဝယ်ပေးပါဦး။ ပိုက်ဆံပို့ ပေးတယ် ဆိုပေမဲ့ သွားဝယ်ရ၊ လူကြုံပို့ ပေးရ အချိန်ကုန် ၊ လူပင်ပန်းတယ်။ ယူအက်စ်မှာနေပြီး အိုင်ဖုန်းတောင် မရှိဘူး၊ ငါ့ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက် ထည့်ပေးလိုက်ရမလား အဟက်..အဟက်...အဟက်လို့ကျွှန်မကို လှောင်တတ်တယ်။ အလုပ်လုပ်နေပြီပဲဟာ စမတ်ဖုန်းကိုင်လို့တိုက်တွန်းတတ်သေးတယ်။ နယူးယောက်ကို သွားလည်ခါနီး ဆူနမ်က နင် ဒီစီမှာ တယောက်တည်း ရုံးတက်ရတာ၊ လမ်းပျောက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ မကြာခင် နယူးယောက်ကို သွားလည်တော့မှာ၊ နယူးယောက်က လူအရမ်းရှုပ်တာ၊ လူကွဲသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ စမတ်ဖုန်းရှိမှ ဖြစ်မယ်လို့အတင်းတိုက်တွန်းတော့မှ စမတ်ဖုန်းကိုင်တယ်။
အဲဒီတုန်းက အသစ်ထွက်တာက အိုင်ဖုန်း ၅။ နောက်သုံးလလောက်ကြာရော ၅ အက်စ် ထွက်ရော။ မကြီးက ဖုန်းကွန်းထရပ်ကုန်တာနဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ၅ အက်စ် ကိုင်တယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဓာတ်ပုံတင်လိုက်တာနဲ့မောင်မောင်က ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်တော့တာပဲ။ သူလည်း ၅ အက်စ် ကိုင်ချင်လို့ တဲ့၊ ဘယ်လိုဝယ်လို့ ရမလဲတဲ့။ လိတ်တက်လွန်းတဲ့ ခြင်္သေ့ကျွှန်းသူကျွှန်းသားတွေတောင် ၅ အက်စ်ရဖို့စောင့်ရတာ။ သူက မြန်မာပြည်ကနေ ကိုင်ချင်လို့ တဲ့။ ရောဂါ...ရောဂါ လိတ်တက် ကိုင်ချင်တဲ့ရောဂါ။ ၃ လလောက်ဆို အသစ် အသစ်တွေ ထွက်နေတာ ပေါ်သမျှ လိတ်တက်တွေ ကိုင်ချင်နေတာ ခရေဇီပါပဲ။ ဘာလို့ ဒီလောက် လိတ်တက်နေမှန်း မသိတော့ဘူး။
ကျွှန်မတို့ညီအစ်မတွေက ဒီကောင် အဖေ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့လိတ်တက် ကိုင်နေတာ။ အိမ်ထောင်ကျရင် သားကျွှေးမှု၊ မယားကျွှေးမှုတို့ နဲ့လိတ်တောင်တက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့မဲ့ကြတယ်။ ဟိုတလောက Emperio Armini နာရီလေး ဈေးချလို့ဝယ်ပေးပါတဲ့ သူ ပိုက်ဆံပို့ ပေးပါမယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၂၅၀ နဲ့၃၀၀ ကြား (မူရင်းဈေးမဟုတ် ဈေးချထားတာ) ။ ယူအက်စ် ရောက်ပြီးကတည်းက သူ့ ကို ဘာမှမဝယ်သေးဘူး။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ဝယ်ပေးလိုက်မယ်။ ဒင်းက ရန်ကုန်မှာသာနေတာ အာမနီမျက်မှန်နဲ့ငါတို့ ထက် ဘရန်းနိုင်တယ်ဟေ့။ ဘင်္ဘောသားသင်တန်းတက်တာလည်း ပိုက်ဆံအတော်ကုန်တယ်။ နောက်တော့ သင်္ဘာလည်း မတက်ဖြစ်။
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ - ၁
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ...ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မ အကြိုက်တူတဲ့ ဆရာသုမောင် စာအုပ်အမည်လေးပါ။ သူတို့ အမျိုးတွေထဲက ဆိုးကြပေကြသူတွေအကြောင်း ရေးဖွဲ့ ထားတာ ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ အမျိုးတွေကတော့ ငါတို့ မကောင်းကြောင်း ရေးတဲ့အကောင်ဆိုပြီး အမြင်ကပ်ကြသတဲ့။
ဆရာသုမောင်တို့ အဘွား၊ ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ ဆရာသာဓုရဲ့ အမေက သိမ်ကြီးဈေးမှာ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးပြီး ရောင်းတဲ့ဈေးသည်။ နေ့ တိုင်း သတင်းစာကို အစကနေအဆုံး စာမတတ်တဲ့အဘွားကို စာတတ်တဲ့အဘိုးက ဖတ်ပြရသတဲ့။ အဘိုး ကျော်ချရင် အဘွား ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲမေးတော့ ငါက သူ့ မျက်လုံး၊ အမူအယာတွေကို သေချာကြည့်နေတာ ဒင်း ကျော်ချလို့ဘယ်ရပါ့မလဲ။ တစ်နေ့ တော့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ဆုငွေထုတ်ထားတဲ့ လူဆိုးကြီးတစ်ယောက် ရုပ်ဖျက်ပြီး သိမ်ကြီးဈေးကို ရောက်လာတာ ပါးနပ်တဲ့၊ သတင်းစာ အမြဲဖတ်တဲ့ အဘွားက ရိပ်မိသတဲ့။
သူ့ ဈေးဗန်းထဲက ငရုတ်သီးမှုန့် တွေနဲ့လူဆိုးမျက်နှာဆီကို ပစ်ပေါက်ပြီးတော့ ဖမ်းတာ ငရုတ်သီး မျက်စိထဲ ဝင်သွားလို့ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်နေတဲ့ လူဆိုးက အငိုက်မိပြီး အဖမ်းခံရသတဲ့။ မြို့ တော်ဝန်က ဆုငွေနဲ့သေနတ်လား၊ ဓားလား တခုခုပဲ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖြစ် ချီးမြှင့်တယ်။ အဘွားက စိတ်ဆိုးတိုင်း အဲဒီ ဓား (သို့ မဟုတ်) သေနတ် တဝင့်ဝင့် ရမ်းလွန်းလို့ယောကျာ်းဖြစ်သူရော၊ သားသမီးတွေကပါ မြို့ တော်ဝန်ကို ပြန်သိမ်းဖို့တောင်းပန်ကြသတဲ့။
အလုပ်ကနေ ပြန်လာရင် အိမ်ကို တန်းပြန်မလာဘဲ အိမ်ဘေးကနေဖြတ်ပြီး စမောလေးဆီသွားတဲ့ အဘိုး စီးလာမဲ့ ဘတ်စ်ကားကို အဘွားက လမ်းထိပ်ကနေ စောင့်ဖမ်းသတဲ့။ ဘတ်စ်ကားထဲမှာ အဘိုးပါမှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲဆိုတော့ ဘတ်စ်ကားမောင်းတဲ့ အကောင်တွေက ငါ့ကိုမြင်ရင် မူမမှန်လို့ဘတ်စ်ကားထဲမှာ မင်းတို့ အဘိုးပါမှန်း သိတာပေါ့။ အဘွားက ရပ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘတ်စ်ကားတွေက ရပ်ပေးရပြီး ကားပေါ်တက်ရှာတာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နာမည်တောင် အဘွားအမည်တွင်သွားပါသတဲ့။
ဖဲရှုံးရင် ဖဲချပ်တွေ လွှင့်ပစ်ပြီး အမယ်လေး... သေပါတော့မယ်...ခု ချက်ချင်း ငါ့ကုို ဆေးရုံပို့ ...သေပါတော့မယ်လို့အော်ဟစ်သတဲ့။ သူ့ အမေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိတဲ့ ဆရာသာဓုက အတန်ခပ်ကြီးကြီး အသစ်ကျပ်ချွှတ် ပိုက်ဆံတွေကို ယပ်တောင်လိုလုပ်ပြီး မျက်နှာနားကပ် ယပ်ခပ်ပေးလိုက်ရင် တက်မတက် ချက်မတက် ဖြစ်နေတာတွေ ယူပစ်သလို ပျောက်။ နတ်ဝင်သည်တွေ နတ်ထွက်သွားသလိုမျိုး။ သူတို့ အမျိုးတွေထဲက ဆိုးကြပေကြသူတွေအကြောင်း ချစ်စနိုးနဲ့ရေးထားတာများ တကယ်ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေး။
ကျွှန်မတို့ က မိဘတွေရဲ့ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေမဟုတ်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတော့ ခင်ရာဆွေမျိုး၊ မြိန်ရာဟင်းကောင်းလို့ဆိုကြသလို အမျိုးတွေထက် မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုတွယ်တာတယ်လို့ဆိုရမလားဘဲ။ ဒီတော့ မျိုးရိုးထဲက ဆိုးပေကြီးတွေအကြောင်း သိပ်မသိဘူး။ အဲ ကျွှန်မတို့ မိသားစုထဲက ဆိုးပေလေး တစ်ယောက်အကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ အဲဒီသိုးမည်းလေးက ကျွှန်မတို့ မိသားစု သိုးဖြူတွေထဲမှာမို့သူ့ အမည်းရောင်က ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာနဲ့တူပါရဲ့ ။ တခြားသိုးမည်းတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူ့ အမည်းက အရောင်ဖျော့နေပြန်ရော။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွှန်မတို့ အတန်းမှာ နှစ်တိုင်း ပထမဆုရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ ဂုပ်ဝဲဆံပင် ပျော့ပျော့စင်းစင်း၊ အသားဖြူဖြူ၊ ဘယ်သန်၊ ဂျပန်မလေးနဲ့ တူပြီး ဂါဝန်လှလှလေးတွေ ဝတ်တတ်တယ်။ သူ့ အမေကလည်း အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ အမေရေ အဲဒီကောင်မလေးက သတင်းစာဖတ်တတ်နေပြီ အမေ့သမီးက ဘာမှမဖတ်တတ်သေးဘူး စာကျက်ခိုင်းဦးလို့မကြီးက အမေ့ကို တိုင်လေ့ရှိတယ်။ ကျွှန်မ လေးတန်းရောက်တော့ ၇ ယောက်တည်း ရှိတဲ့အတန်းမှာ ပထမဆု ရတယ်။ ဆုဆိုတာကို သိသွားလို့ နဲ့တူပါရဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်း ဆုတွေ အမြဲရတယ်။
မကြီက နှစ်တိုင်း ဆုရတယ်။ ၈ တန်းအစိုးရစစ် တမြို့ နယ်လုံးမှာ အဆင့် ၂၀ ဝင်လို့ငပုတောမြို့ မှာ ဆုသွားယူရတယ်။ ကျွှန်မတို့ အိမ်မှာ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေရဲ့ဆုရလတ်မှတ်တွေကို မှန်ဘောင်သွင်းပြီး ချိတ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေ နာဂစ်နဲ့ ပါသွားရှာပြီ။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မအတွက် အဖေ၊ အမေက ဆုအမြဲ တက်ယူရပေမဲ့ မောင်မောင်ကတော့ ဆုတခုမှ မရဖူးဘူး။ စာမေးပွဲရှုံးရင် အိမ်ကို ရီပို့ ကတ်မပြ ငြိမ်ကုပ်နေတတ်ပြီး အမှတ်များရင်တော့ဖြင့် အဖေ့ရေ... အမေ့ရေ ...သား...ဘယ်လောက်ရတယ်လို့ ဖြင့် တလမ်းလုံးကြားအောင် လမ်းထိပ်ကနေ အော်ဟစ်လာတတ်တယ်။ ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မင်း အစ်မတွေ ခြေရာ တစ်စက်လေးမှကို မမှီပါလားကွလို့ဆိုကြတယ်။
မကြီးနဲ့ကျွှန်မကြားမှာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် မွေးခဲ့ပေမဲ့ ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ အာဇိနာဆိုလား ဘာဆိုလားပေါက်လို့သေသွားတယ်တဲ့။ ခေတ်မှီဆေးဝါးမရှိ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိတဲ့ တောနယ်ဒေသမို့မသေသင့်ဘဲ သေရတာလို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသော သားလည်းဖြစ်၊ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်၊ သူ့ မွေးပြီးမှ စီးပွားတက်ဆိုပြီး အလိုလိုက်ခံရတယ်။ ကျွှန်မတို့ ဒေသဖက်မှာ ဝါဝင်ပြီဆိုရင် ဦးရှင်ကြီး ပင့်ကြတယ်။ ဦးရှင်ကြီးရုပ်တုရှိတဲ့ ကျောင်းဆောင်လေးစိုက်၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်း၊ ကောက်ညှင်း၊ ထန်းညက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကွှမ်းရွက် ကပ်ပြီး ရေငန်တကြော အပိုင်စိုးပါတဲ့......ဦးရှင်ကြီးခင်ဗျား...။ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်ပြီး အသံဝါကြီးနဲ့(အသံဝါ၊ အသံနက် အသံကို အရောင်ဆိုးတာ မြန်မာလူမျိုးပဲ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ ) ပင့်ဖိတ်တဲ့ ဦးအောင်မြတ်အသံကြားရင် မောင်မောင်တို့ပြေးတော့တာပဲ။ ဦးရှင်ကြီး ဆွမ်းပင့်က စွန့် မဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ငှက်ပျောသီး၊ ထန်းလျက်ကို မျှော်တာ။
မောင်မောင့်အတွက် နာမည်ရွေးတော့ ဗေဒင်တွက်တဲ့ ဦးအောင်မြတ်က သူ့ ကြောင့် စီးပွားတက်သလို သူ့ ကြောင့်ပဲ ကုန်မယ်လို့ဟောလိုက်သတဲ့။ အမေ ရွေးခိုင်းလို့ဘာဘူကုလားဆီကနေ သူရွေးပေးတဲ့ အောင်ဘာလေ ထီလက်မှတ်က သိန်းဆုကို တစ်နှစ်၊ နှစ်လုံးနဲ့လွဲသွားသတဲ့။ အစပ်မစားနိုင်တဲ့ သူ့ အတွက် ကြက်ဥ အမြဲကြော်ပေးရတယ်။ လက်ကျိုးလို့ကျောက်ပတ်တီးစီးတာ လက်ကကောက်နေလို့ပြန်ချိုးရတယ်။ ဟိုင်းကြီးတကျွှန်းလုံးမှာ လက်သုံးခါကျိုးတာ သူတစ်ယောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်ရဲ့ ။ သူ့ ခေတ်သူ့ အခါက သူ အကဲဆုံး၊ မျောက်မူးလဲလေး၊ တချက်လေးမှကို ငြိမ်ငြိမ်မနေတာ။ မကြီးက သူ့ ဘာသာ အေးအေးနေတတ်သူ၊ ကျွှန်မက မဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲ။ မောင်မောင်က အိမ်မှာဆိုရင် ဘယ်လိုတီးလိုက်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့လက်သီးက တပြင်ပြင်။ သူများ ဆော်ထည့်လိုက်လို့ညှိမည်းစွဲတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်ခဲ့ရတာချည်းပဲ။
ကျွှန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တောနယ်ဆိုတော့ ကင်မရာမရှိ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရမှန်းလည်း မသိ။ အိမ်တွေလည်းပြောင်းတော့ ဓာတ်ပုံတွေလည်း ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မမှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံဆိုလို့ပြန်ကြည့်စရာတောင် မရှိဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲလို့ကျွှန်မက မေးရင် ဝဝကစ်ကစ် ဖြူဖြူလေးလို့အမေနဲ့ မကြီးက ဖြေတတ်တယ်။ မောင်မောင့်မှာတော့ မော်တင်စွန်းဘုရားပွဲမှာ သူ့ ထက်ကြီးတဲ့ ဝါးသေနတ်ကြီးလွယ်ပြီး စပ်ဖြဲဖြဲမျက်နှာပေးနဲ့မြင်းစီးရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတောင် သေနတ်ကို လက်ကမချဘူး။ သေနတ်ပြီး သေနတ် သေနတ်ဆိုင် ဖွင့်လို့ ရတယ်။ သေနတ် အဲလောက်ကြိုက်လို့ကြီးလာရင် စစ်ဗိုလ်ဖြစ်မလားမှတ်တယ်။ ပြန်မပြော နားမထောင် ပြောဆိုဆုံးမရတာ ခက်လွန်းလို့စစ်တပ်ထဲပို့ မယ် စိတ်ကူးတယ် ဒင်းက စစ်တပ်ထဲ လုံးဝမဝင်ဘူးတဲ့။ ကျွှန်မတို့ ကလည်း စစ်တပ်ထဲ ပို့ မယ်လို့ သာဆိုတာ ကျွှန်မတို့ ဒေသဖက်မှာတော့ အစိမ်းရောင်၊ နက်ပြာရောင် ယူနီဖောင်းတွေကို တိုင်းပြည်၊ ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူထက် ကျွှန်မတို့ကျွှေးမွေးပေးကမ်း ထောက်ပံ့ရသူတွေလို့မြင်ကြတာကိုး။
တီဗွီဂိမ်းတွေ ပေါ်လာတော့ တီဗွီဂိမ်းဆော့တာများ ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့။ မောင်မောင် ဘယ်မှာလည်း မေးမနေနဲ့ဂိမ်းဆိုင်မှာ။ ဂိမ်းဆော့လွန်းလို့မျက်စိတွေနီ၊ အတီးခံရပေမဲ့လည်း ဆော့မြဲဆော့ဆဲ။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေ ပုသိမ်မှာ အထက်တန်းကျောင်းတက်တော့ အသိမိတ်ဆွေအိမ်မှာ ထမင်းလခပေးနေတယ်။ တောနယ်မှာ ဗိုက်ကားအောင် စားသောက်လာတဲ့ ကျွှန်မတို့ တွေ မြို့ ပေါ်ရောက်တော့ စကေးနဲ့စားရတာ အစပိုင်းက ဗိုက်မဝဘူး။ ထမင်းမဝဘူး အဖေ့ရေလို့ပြောလိုက်တာ အဖေနဲ့ အမေ တညလုံး အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့။ ပညာရေးကောင်းစေချင်လို့မြို့ ပေါ်ပို့ မိတာ မှားပြီလား။ စရိတ်ကြီးတဲ့ မြို့ ကျောင်းစရိတ်ကို လစဉ်မှန်မှန် ပို့ နိုင်ပါမလား။ လစဉ်ပို့ ငွေကို ပိုပေးတတ်သလို တလတခေါက် မြို့ တက်လာပြီး ကျွှန်မတို့ တွေကို ထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ ခေါ်ကျွှေးလေ့ရှိတယ်။
သူများအိမ်မှာနေဖူးမှ ကျောင်းမှန်းကန်မှန်း စည်းကမ်းတကျဖြစ်သွားတဲ့ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေကိုကြည့်ပြီး အဖေက ပုသိမ်အိမ်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ သူ့ သားတော်မောင်ကိုလည်း ထားချင်ပေမဲ့ ငယ်သေးလို့လက်မခံသေးဘူးတဲ့။ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသုိုလ် တက်ချင်တဲ့ မကြီးကြောင့် ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖို့ဖန်လာတယ်။ အဖေ လာခေါ်တဲ့အချိန် ကျွှန်မက ကိုးတန်းနှစ်ဝက် ဖြစ်နေလို့ကိုးတန်းဖြေပြီးတဲ့နေ့ မှာပဲ အဖေက လာခေါ်ပါတယ်။ မောင်မောင်ကတော့ ၆ တန်းတက်ဖို့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်။ ကျွှန်မတို့ကျောင်းတက်ဖို့ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်းဝယ်လိုက်တော့ မောင်မောင်က သူများအိမ်မှာ မနေဖူးလိုက်ဘူး။ ဒီကောင် သူများအိမ်မှာ မနေဖူးလို့အချိုးမပြေတာလို့ကျွှန်မတို့ ညီမတွေက ဆုိုကြတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ပျောက်သွားလို့မကြီးဆို ခေါင်းနပန်းကြီးသွားပဲ။ အရပ်ကူပါ၊ လူဝိုင်းပါ၊ ရှာကြ၊ ဖွေကြတော့ မိန်းနားက တက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ဘောလုံးကန်နေတာ တွေ့ ခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီလို ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ ထွင်းတယ်။ မောင်မောင့်ကို တွေ့ ချင်ရင် သူ့ ကစားတတ်တဲ့ ၈ လမ်းက ဂိမ်းဆိုင်မှာ သွားရှာရတယ်။ အမေ၊ အစ်မတွေ လာရှာရင် သူက စိတ်ဆိုးပြန်သေးတယ်။ ဆယ်တန်းရောက်တော့ လှည်းတန်းမှာ သွားထားလို့ မဖြစ်ဘူး။ တော်ကြာ ကျူရှင်သွားတယ်ဆိုပြီး ကျူရှင်မရောက်ဘဲ အိမ်နဲ့ ကျူရှင်ကြား ပျောက်သွားရင် ဒုက္ခ။ အိမ်နားက သူ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ သူနဲ့ သူ့ ငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဝိုင်း စီစဉ်တယ်။ ကျူရှင်ဆရာက ရောက်နေပြီ မောင်မောင်က မရောက်သေးလို့ဖုန်းဆက်ခေါ်မှ အူယားဖားယား ပြေးတယ် ဟိုဖက်လမ်းက ကျူရှင်အိမ်ကုို။ စာမကျက်ဘူးလို့ဆရာမက ပြောရင် စာကျက်ဖို့ ကို အဖေ၊ အဖေ၊ အစ်မတွေ တအိမ်လုံးက ဝိုင်းဆူ။ သူကတော့ အေးဆေးပဲ ဒီဖက်နားကဝင် ဟိုဖက်နားကထွက်။
အဖေက ငါ့သမီးနှစ်ယောက် ဆယ်တန်းအောင်သွားတာ သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။ မင်းကျမှ တအိမ်လုံး အကောင်းမနေရ ကျွှတ်ကျွှတ်ကိုညံ။ သူ့ ကိုယ်ကိုသူ ဂုဏ်ထူး ၂ လုံး၊ ၃ လုံး ထွက်မယ်ဆိုလို့သူ့ ဂိုက်က တအံ့တသြဖြစ်လို့ ။ သူ့ လိုမျိုး စာမကျက်ဘဲ ဂုဏ်ထူး ၂ လုံး ထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့လူ သူ့ တသက်မှာ မတွေ့ ဘူးသေးပါဘူးတဲ့။ သူ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ တခုခုဖြစ်နေတယ် ထင်ပါတယ်တဲ့။ ဘဝင်လေဟပ် သူ့ ကိုယ်သူ အထင်ကြီးနေတာ။ ဂုဏ်ထူးဘယ်နှစ်လုံးမှန်းလဲ မေးရင်တောင် မသိသေးပါဘူး အောင်စာရင်းထွက်မှ အဖြေသိရမယ်လို့ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြေရတာ သူ့ အလှည့်ကျမှ ဂုဏ်ထူး ၂ လုံး အသေအချာတဲ့။ ကျွှန်မတောင် သချာင်္နဲ့သိပ္ဗံ နှစ်လုံးတော့ သေချာတယ်လို့ပြောခဲ့တာ အောင်စာရင်းထွက်တော့မှ မြန်မာစာပါထွက်မှန်းသိတာ။ မြန်မာစာ ဖြေနိုင်ပေမဲ့ မမှန်းရဲဘူးလေ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာ ထွက်ဖို့ အရမ်းခက်တာ။
အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေတဲ့နေ့ ကျမှ သူတော့ ကျတော့မယ်၊ ခြစ်ချတော့မယ်ဆိုလို့အောင်မလေး ခြစ်တော့ မခြစ်ချပါနဲ့ အောင်ချင်အောင် မအောင်ချင်နေ ပြီးအောင်ဖြေပါလို့တောင်းပန်ရတယ်။ အောင်မယ်လို့ထင်တားတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းက ကျပြီး ကျမယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူက အောင်တယ် မော်ထရေးရှင်းပေါင်းများစွာနဲ့ဂုဏ်ထူးလား ဝေးစွ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ ပထမဆုံး စတက်တဲ့နေ့ က ကျွှန်မကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွှန်မမောင်လေးမို့ဂရုတစိုက် ကူညီကြတယ်။ ကျောင်းမသွားဘူးလားလို့မေးလိုက်ရင် ဆရာမ မလာ၊ ရိုးကောထိုးဖို့ကျောင်းသွားရသလိုပဲ။ ကျောင်းကလည်း အဝေးကြီး၊ တနေကုန် ဝထ္ထုဖတ်ပြီး ပြန်လာတာ။ ကျောင်းကို ဘာလုို့အပင်းပန်ခံ သွားနေမှာလဲ အိမ်မှာနှပ်နေတာကမှ ကောင်းသေးတယ်တဲ့။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကံ့ကော်တော၊ မြေနီလမ်း၊ ဦးချစ်၊ ဂျပ်ဆင်၊ အင်းလျားကန်၊ အင်းလျားဆောင် တက္ကသိုလ်ဝထ္ထုတွေဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတာ ဝထ္ထုထဲကနဲ့အပြင်မှာ လုံးဝကွာတယ်။ ကားကို တနာရီ၊ တနာရီခွဲလောက် ဖုန်တထောင်းထောင်း၊ ချိုင့်ခွက်တွေအပြည့် လမ်းတွေကို ဒိုင်နာကားက ဒုံးပျံနှုန်းနဲ့ဖိုက်တင်ပလေးကြတော့ ကျောင်းရောက်တာနဲ့ဗိုက်ဖြည့်ဖို့ကန်တင်း အရင်ပြေးရတယ်။ မြို့ စွန် မိဘတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာဆိုတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်။ ကျောင်းပြီးတော့မှ အရက်သမား၊ ဖဲသမား ဖြစ်ကြသူတွေ ဒုနဲ့ ဒေး။ ကျွှန်မကိုယ်တိုင်တောင် ကျောင်းသွားဖို့ပျင်းတော့ သူ့ ကို အတင်းမတိုက်တွန်းတော့ဘူး။
ဒေးတက်ရတာ ပျင်းစရာကောင်းလို့အဝေးသင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့အဖေက သဘောမတူဘူး ။ သူ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကို ရစေချင်လို့ တဲ့။ ကျောင်းမတက်ချင်တဲ့သူကို နားချလို့ လည်း အလကား။ အဝေးသင်တက်တော့ အဆိုင်းမင့်တွေကို တခြားတစ်ယာက်ကို လုပ်ခိုင်းတယ်။ သွားတင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သွားတင်ရတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးကလည်း တကယ်လေပါတယ်။ စာမေးပွဲနီးရင် ခိုးချဖို့စာအုပ်လေးတွေ ဝယ်ထားတယ်။ ဒေးတက်တဲ့သူတွေတောင် မတတ်တာ အဝေးသင်တက်တဲ့သူတွေ တကယ်ရော တတ်ရဲ့ လားမသိ။
ဒီလိုနဲ့ဒေးကနေ အဝေးသင်ပြောင်း၊ အဝေးသင်ရောက်တော့လည်း စာမေးပွဲ ဘယ်အချိန်စစ်သွားမှန်းမသိလိုက်နဲ့ပထမနှစ်ကို သုံးနှစ်တက်တယ်။ ကျောင်းပျော်ကြီးတွေ၊ ကျောင်းဆွေးကြီးတွေလို့ခေါ်ရမလား။ သူ တစ်ယောက်တည်း ဒီလိုဖြစ်သလားမှတ်တယ် မကြီးသူငယ်ချင်းရဲ့ မောင်လေး သူ့ အရွယ်ကောင်လေးလည်း အဲဒီလို။ တက္ကသို်လ်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို ဦးသိန်းဝင်းတိုဖယ်လ်၊ မြေနီကုန်းက ဆရာနယ်ဆင်တို့ ဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ရတယ်။ တကယ်တော့ ကျွှန်မက ငပျင်း မကြီး တက်ခိုင်းလို့တက်ရတာ။ တိုဖယ်ဖြေဖို့ လည်းမဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာ အဆက်မပြတ် ဖြစ်စေဖို့မကြီးက တက်ခိုင်းတာ။ မောင်မောင့်ကို တက်ခိုင်းရင် လိုက်ပို့ တဲ့ တစ်ရက်သာ တက်တယ် နောက်နေ့မသွားတော့ဘူး။ ကျွှန်မကတော့ တက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့ ကို ဘယ်လောက်ပေးရတာဆိုပြီး နှမျောလို့ သွားတက်တာ။
ကျွှန်မမိဘတွေကလည်း သင်တန်းတက်ဖို့ ၊ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ဆို ဘယ်တော့မှ မငြင်းဘူး။ အိမ်အလုပ်တွေ ကူလုပ်ပေးတဲ့ အစ်မမရှိတော့ မကြီးက ချက်ပြုတ်၊ ကျွှန်မက အသီးအရွက်လှီးပေး၊ ပန်းကန်ဆေး၊ မောင်မောင်က ထမင်းအိုးတည်၊ ကြက်ဥကြော်၊ အမှိုက်ပစ် တာဝန်ခွဲယူကြတယ်။ တလတခေါက်၊ ကျွှန်မတို့ တွေ စာမေးပွဲရှိရင် အဖေတို့ က ရန်ကုန်တက်လာတယ်။ အမေ လာမယ်ဆိုရင် ကျွှန်မတို့ မောင်နှမတွေ အိမ်ကုိုရှင်းလင်း၊ မလျှော်ရသေးတဲ့ အဝတ်တွေလျှော်။ နှမြောတတ်တဲ့အမေကို ဒီခေတ်ဈေးနှုန်းတွေ အမှန်အတိုင်း မပြောရဲဘူး။ မောင်မောင်က အမေ့သမီးတွေ အမေ့ကို ညာထားတာ။ အဲဒီဖိနပ်က ဘယ်လောက်တန်တာလို့တိုင်တတ်တယ်။ မိတ်ကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီကို မကြီးက လိုရီရယ်၊ ရယ်ဗလွန် သုံးတယ်။ ဈေးကြီးပေမဲ့ အကြာကြီးခံတယ် တွက်လိုက်ရင် တလကို ဘယ်လောက်ပဲ ကျတာ။ မကြီးက အသားအရေ sensitive ဖြစ်တယ်။ အမေ့က နှုတ်ခမ်းနီဆိုးကြည့်ပြီး သမီး ဒါ ဘယ်လောက်ပေးရလဲ ။ ၁၀၀၀ (တကယ်က ခြောက်ထောင်ကျော်) အဲဒါဆို ကြုံရင် အမေ့အတွက် တစ်ခုဝယ်ခဲ့ပေးဆိုလို့ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေ ဟိုက်ခနဲ ဖြစ်သွားဖူးတယ်။
အမေ့ကို ဝယ်ပေးရတာ ကိစ္စမရှိပါဘူး နှုတ်ခမ်းနီလေးကောင်းလို့သူ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ ဝယ်ပေးပါဆိုလာရင် ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေ အမေ့ကို ဘယ်လိုညာရပါ့။ ဈေးအမှန် သွားပြောလို့ ကတော့ ဒီလောက်ဈေးကြီးတာ ဘာလို့ သုံးရတာတုန်း။ ဒီဟာ သုံးလို့ လည်း ညည်းတို့ပိုလှလာမဟုတ်ဘူး။ ဒီရုပ်ကဒီရုပ်လို့အပွမ်ခံရမယ်။ အလုပ်လုပ်၊ သင်တန်းတွေတက်၊ ဒေါ်လာပေးဖြေရတဲ့ စာမေးပွဲတွေမို့ရှုံးရင်ပလုံ၊ ပုိုက်ဆံမကုန်ချင်၊ စာမေးပွဲ မကျချင်လို့စာမေးပွဲနီးရင် စိတ်တွေဖိစီးလို့ရုပ်ကချုံးချူံးကျတယ်။ ကျောင်းမသွား၊ သင်တန်းမတက်၊ အိမ်မှာ တနေကုန် အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်လိုက်၊ လောင်းလိုက်၊ လတ်လျားလတ်လျားနေ မကြိုးစားတဲ့ မောင်မောင့်ကို ကျွှန်မတို့ညီအစ်မက ကြည့်မရဘူးရယ်။ အဖေ့သားကို အဖေပြန်ခေါ်ထိန်းပါလို့သမီးတွေက တလေသံတည်း ထွက်တာနဲ့အဖေက သူ့ သားကို လာခေါ်သွားတယ်။
တောကို ပြန်ရလို့ဝမ်းနည်းဖို့နေနေသာသာ တောက အစားအသောက် ကောင်းတယ်၊ နားအေးပါးအေးတယ်ဆိုပြီး ပျော်တောင်နေသေးတယ်။ အစားအသောက် မှန်လာတာနဲ့ဘော်ဒီတက်လာသလို အရပ်လည်း ရှည်ထွက်လာတယ်။ ဗလတောင့်အောင်လို့ဒိုက်ထိုးသေးတယ်။ ကိစ္စရှိလို့ရန်ကုန်တက်လာရင်တောင် ရန်ကုန်က ပူတယ်ဆိုပြီး တောကိုပြန်ဆင်းသွားတော့တာပဲ။ ကျွှန်မတို့ ညီအစ်မတွေက ဒီကောင်ဆိုးတယ်လို့ ဆိုရင် အကြောင်းမသိသူတွေက မယုံကြဘူး။ စကားပြောဆိုတာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး၊ တဖက်သားကို တလေးတစားနဲ့ဟုတ်ကဲခင်ဗျ...ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ လို့ပြောတတ်တာကိုး။ အကယ်တော့ ပြန်မပြော နားမထောင် ပျော့စိစိနဲ့ နံတဲ့ ကြောင်ချေး။ ကျွှန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြရင် ငြီးညူကြတာက ကျွှန်မတို့ မောင်တွေအကြောင်း။ ဆိုင်ကို မဦးစီးတဲ့ ဖြိုးဝေရဲ့ အကို၊ အရက်မူးလာရင် သောင်းကြမ်းတတ်တဲ့ ခိုင်မေ့မောင်၊ တနေ့ တနေ့အိမ်မှာ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်၊ ဂစ်တာလေး တဂေါင်ဂေါင်နေတတ်တဲ့ ဝတ်ရည်မောင်။ မလေးရှား၊ ကိုရီးယားသွားပေမဲ့ စရိတ်ကြေရုံနဲ့ပြန်လာတဲ့ သင်းခိုင်မောင်။ ကျွှန်မတို့ တွေက သင်းခိုင်ရေ အဖြစ်မရှိတဲ့နင့်မာင်ကို လွှတ်မဲ့အစား နင် နိုင်ငံခြားထွက်တာကမှ သူ့ ထက် သာဦးမယ်လို့ပြောကြတယ်။
မောင်မောင့်ကိုခင်တဲ့ ငါးဒိုင်ကလူတွေ အရက်သွားသောက်ဖို့လာခေါ်ရင် ပါသွားတယ်။ အဖေက စိတ်ပူတာပေါ့။ အဖေ့ဝမ်းကွဲညီ ဘေးချေ (ဦးလေး) က ငါးဒိုင်က လူတွေကို မေးကြည့်ပြီးပြီ မောင်မောင်က အရက်မသောက်ဘူးတဲ့။ မောင်မောင် စားတဲ့အမြည်းက သူတို့ တဝိုင်းလုံးက အရက်ဖိုးထက်တောင် ပိုများတယ်ဆိုပဲ။ မောင်မောင်က အရက်သောက်လို့ မရဘူး အရက်သောက်ရင် ဗိုက်ထဲက အောင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဆေးလိပ်လည်း မသောက်ဘူး။ ဆေးလိပ်နံ့ ရရင် အသက်ရှုမဝလို့ တဲ့။ မကြီးနဲ့မောင်မောင်က ရုပ်လည်းဆင်ကြသလို အကျင့်တွေလည်း နည်းနည်းတူတယ်။ မကြီးက ဆေးလိပ်နံ့ ခံလို့မရဘူး။ တံမြက်စည်းလှည်းရင် Mask ဝတ်ပြီး လှည်းရတယ်။ နှာခေါင်းထဲ ဖုန်ဝင်ရင် ချောင်းတဟွပ်ဟွပ် ဆိုးရော။
အဖေက ငယ်ငယ်တုန်းက အရက်သောက်ပေမဲ့ မကြီးဆယ်တန်းအောင်တဲ့နှစ် ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်လို့ဆေးလိပ်ရော၊ အရက်ရော ဖြတ်တယ်။ တခါတလေမှ ဘီယာသောက်တယ်။ အဖေ ဘီယာသောက်လာရင် စကားအရမ်းများလို့ ဘီယာသောက်လာမှန်း အရမ်းသိတယ်။ အမေက ခပ်အေးအေး။ ကျွှန်မကတော့ Teetotaler အရက်လုံးဝ မသောက်တဲ့သူလို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေဆုံရင်၊ မွေးနေ့ ၊ ဂုဏ်ပြုပွဲတွေဆို ဝိုင်တစ်ခွက်လောက် သောက်တတ်သူ။ ဆေးလိပ်ကင်းတဲ့ မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရလို့ လား မသိဘူး ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူဆီက အနံ့ ဆိုးကို အရမ်းသိတယ် မခံနိုင်ဘူး။
အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ ဂိမ်းကို အရင်ကလောက် မဆော့တော့ဘဲ စာအုပ်တွေ ပိုဖတ်လာတယ်။ သူ့ အတွက် စက်ပစ္စည်းဆိုင် ဖွင့်ပေးတာ အဖေက စက်ပစ္စည်းတွေ ကျွှမ်းကျင်တော့ ဝယ်တဲ့သူက ဘာဝယ်ရမှန်း မသိရင်တောင် အဖေက ဘာစက်လဲ တရုတ်နီလား၊ လေးလုံးထိုးလား၊ စက်ကြီးလား ဒါဆို ဘယ်ဟာ ဝယ်သင့်တယ်လို့အကြံပေးတော့ ဆိုင်ဖွင့်ခါစဆိုပေမဲ့ ရောင်းရတယ်။ တနေ့ တနေ့ရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံတွေသိမ်း၊ မြို့ ပို့ ၊ ဆိုင်မှာ ဘာပစ္စည်းတွေ လိုလဲစစ်၊ သင်္ဘောနဲ့ ပစ္စည်းတွေ မှာဖို့စာရင်းရေး။ ပစ္စည်းတွေ ရောက်လာရင် ဈေးနှုန်းဖြတ်၊ ဈေးနှုန်းကပ်၊ အကြွေးစာရင်းပေါင်း။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ကျွှန်မတို့ ပြန်ရင် အဖေ့စာရင်းတွေ ကူလုပ်ရတယ်။ မောင်မောင် အိမ်မှာအချိန်တိုင်းမရှိ ဈေးဝယ်သူလာရင် လှမ်းခေါ်ရ၊ ညနေ ပုသိမ်သဘောင်္က ကုန်လာချနေပြီ စာရင်းက အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး မောင်မောင့်ကို ရှာနေရမှာထက် အဖေက သူ့ ဘာသာလုပ်ရတာ များတယ်။ ဒီတော့ သူ့ သင်္ဘောအလုပ်တွေအပြင် ဆိုင်အလုပ်ပါ လုပ်ရတော့ အဖေ ပင်ပန်းတယ်။ မောင်မောင်က အဲလို မသိတတ်ဘူး။ အဖေက နှစ်ဆပင်ပန်းလို့အဲဒီဆိုင့်ကို ဖြုတ်ချင်နေတာ နာဂစ်ဖြုတ်တော့မှပဲ ပြုတ်တော့တယ်။
တခါတုန်းက ပစ္စည်းဈေးတွေ စစ်ရင်း မူလီဈေးက မူရင်းဈေးထက် နည်းနည်းပဲကွာတော့ ကျွှန်မများ မျက်စိမှားသလားပေါ့။ အရင်ဘောက်ချာဟောင်းတွေ ပြန်စစ်တော့မှ အဖေနဲ့ ကျွှန်မ ဟိုက်ခနဲ ပက်လက်လှန်သွားတယ်။ တွေ့ လိုက်ရတာက မူရင်းဈေးထက် နည်းနည်းပဲ ကွာတာ။ အဲဒီပစ္စည်းကို မောင်မောင် ဈေးဖြတ်တာ။ မင်း ဘာလို့ဒီဈေးဖြတ်ရတာလဲမေးတော့ တခြားဆိုင် သွားဝယ်တော့ အဲဒီဈေး ပေါက်လို့ တဲ့။ အဲဒီဆိုင်က သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ရထားလို့ဒီဈေးရောင်းနိုင်တာပေါ့ကွ။ မူရင်း ဒီဈေး၊ တန်ဆာခ (သင်္ဘောသယ်ခ)၊ အလုပ်သမားခတွေ ထပ်ပေါင်းရမယ်လေ။ ကိုယ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီဈေးပေါက်တာကို သူများဆိုင်က အရင်တုန်းကဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရောင်းလို့ ဖြစ်မလားကွ။ ဈေးဝယ်သူကို ဒီပစ္စည်းက တက်ဈေးမိထားလို့ကျွှန်တော်တို့ ဆို်င်မှာ ဈေးကြီးတယ်၊ ဘယ်ဆိုင်မှာတော့ သက်သာတယ်လို့ညွှန်းပေးလိုက်ပေါ့ကွ။ ကျွှန်မတို့ တွေက ဒီကောင် စီးပွားရေးလုပ်ရင် ကြီးပွားဦးမယ်လို့ခနဲ့ ကြတယ်။
တနေ့ တော့ အဖေ၊ အမေ၊ မောင်မောင် ဖုန်းမဆက် ဘာမဆက် ရန်ကုန်ကို ဗြုန်းစားကြီး ပေါက်ချလာတယ် မျက်စိမျက်နှာမကောင်း။ မောင်မောင်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့စာပေးစာယူ ကြိုက်နေကြသတဲ့။ အဲဒီကောင်မလေးက သူဋ္ဌေးတူမဆိုပေမဲ့ ဟိုလူ့ ဆိုင်ကယ်နောက်လိုက်၊ ဒီလို့ ဆိုင်ကယ်နောက်လိုက်၊ ပျံတံတံ၊ နှန့် တံ့တံ့မို့သဘောမကျဘူးတဲ့။ အမေတို့ က ဆင်းရဲချမ်းသာတာထက် အကျင့်စရိုက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်၊ ရိုးရိုးသားသား၊ အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဆို သဘောတူမှာပါ။ တော်ကြာ ကောင်မလေးက မောင်မောင့်ကို ခိုးပြေးမှာစိုးလို့ဘာမှအသိမပေးဘဲ ဗြုန်းစားကြီး ရန်ကုန် ခေါ်ချလာတာတဲ့။